1Sainte Bokin'ny Tantara – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / 1Sainte Bokin'ny Tantara
1:1 Adam, Seth, Enôsa,
1:2 Kenana, Mahalalila, Jared,
1:3 i Enoka, Metosela, Lameka,
1:4 Noa, Sema, lambo sira, ary Jafeta.
1:5 Ny zanakalahin'i Jafeta: Gomera, sy Magoga, sy Maday, sy ny tanora, Tobala, Meseka, ravin.
1:6 Ary ny zanakalahin'i Gomera dia: Askenaza, sy Rifata, ary Togarma.
1:7 Ary ny zanakalahin'i Javana dia: Elisaha sy Tarsisy, Kitima sy Rodanim.
1:8 Ary ny zanakalahin'i Hama: Kosy, ary Mizraima, ary Pota, ary Kanana.
1:9 Ary ny zanakalahin'i Kosy dia: ny tenany, sy Havila, Sbth, sy Rama, ary Sabteka. Ary ny zanakalahin'i Ragama: Sheba sy Dadan.
1:10 Ary Kosy nitoe-jaza an'i Nimroda, ary izy no voalohany izay tonga mahery eto an-tany.
1:11 Marina tokoa, Mizraima torontoronina Lodita, sy ny Anamita, sy ny Lehabita, sy ny Naftohita,
1:12 ary koa ny Patrosita sy ny Kaslohita: avy izany ny Filistina ary ny Kaftorita nivoaka.
1:13 Marina tokoa, Kanana torontoronina Sidona, ny lahimatoa, ary koa ny Hetita,
1:14 ary ny Jebosita, ary ny Amorita, ary ny Girgasita,
1:15 sy ny Hivita, sy ny Arkita, sy ny Sinita,
1:16 ary koa ny Arvadian, ary ny Samarite, ary ny Harnatita.
1:17 Ny zanakalahin'i Sema dia: Elama, sy Asyra, ary Arpaksada, sy Loda, ary Arama, ary Oza, sy Hola, sy Gatera, ary Maseka.
1:18 Dia nanan-anaka Arpaksada Sela, izay koa dia nanan'anaka Ebera.
1:19 Ary ny Ebera niteraka roa lahy. Ny anaran'ny iray natao hoe Palega, satria tamin'ny androny no nizarana ny tany. Ary ny anaran'ny rahalahiny dia Joktana.
1:20 Ary Joktana torontoronina Almodada, sy Salefa, sy Hazarmaveta, sy Jera,
1:21 ary koa ny Hadorama, sy Ozala, sy Dikla,
1:22 ary avy eo dia Obal, sy Abimaela, sy Sheba, tokoa
1:23 koa Ofira, sy Havila, ary Jobaba. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Joktana.
1:24 Sema, Arpaksada, Sela,
1:25 Ebera, Palega, alika,
1:26 Seroga, Nahora, Tera,
1:27 Abrama, dia Abrahama izany.
1:28 Ary ny zanakalahin'i Abrahama: Isaka sy Isimaela.
1:29 Ary izao no taranany: Nebaiota, lahimatoan'Isimaela, Nebaiota, ary avy eo dia Kedara, sy Adbela, sy Mibsama,
1:30 sy Misma, sy Misma sy Doma, pulp, Hadad, sy Tema,
1:31 Jetora, Nfis, Kedma. Ireo no zanakalahin'Isimaela.
1:32 Ary ny zanakalahin'i Ketora, vaditsindranon'i Abrahama, izay nanan'anaka: an'i Zimrama, Joksana, lalana, Midiana, Jisbaka, ary Soaha. Ary ny zanakalahin'i Joksana: Sheba sy Dedana. Ary ny zanakalahin'i Dedana: Asorima, sy Letosima, ary Leomima.
1:33 Ary ny zanakalahin'i Midiana: efaha, sy Efera, sy Hanoka, sy Abida, ary Eldaha. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Ketora.
1:34 Ary Abrahama Isaka torontoronina, izay ny zanany, dia Esao sy Isiraely.
1:35 Ny zanakalahin'i Esao: Elifaza, Regoela, Jeosy, Jalama, ary Kora.
1:36 Ny zanak'i Elifaza dia: namana, Omar, Zefo, Gatama, Ken, ary Timna, Amalekita.
1:37 Ary ny zanakalahin'i Regoela: Nahata, Zera, Sama, Miza.
1:38 Ary ny zanakalahin'i Seira: Lotan, Sobala, Zibona, Ana, Disona, arivo, Disana.
1:39 Ary ny zanakalahin'i Lotana: fa, Hemana. Ary ny anabavin'i Lotana dia Timna.
1:40 Ary ny zanakalahin'i Sobala: iray hafa, sy Manahata, sy Ebala, Kshefi, ary Onama. Ary ny zanakalahin'i Zibona: Aia sy Ana. Ary ny zanakalahin'i Ana: Disona.
1:41 Ary ny zanakalahin'i Disona: Hamran, ary Esheban, sy Jitrana, ary Kerana.
1:42 Ny zanakalahin i Ezera: Bilhan, sy Zavana, ary Will. Ary ny zanakalahin'i Disana: Oza sy Arana.
1:43 Ary izao no mpanjaka izay nanjaka tany amin'ny tany Edoma, talohan'ny nisy mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely: tsara tarehy, ny zanak'i Beora; ary ny anaran'ny tanànany Dinaba.
1:44 Ary maty Bela, ary Jobaba, ny zanak'i Zera, avy any Bozra, no nanjaka nandimby azy.
1:45 Ary rehefa maty Jobaba, koa efa, Hosama, avy any amin'ny tanin'ny Temanita, no nanjaka nandimby azy.
1:46 Dia lasa koa ny azy Hosama, sy Hadada, ny zanak'i Bedada, no nanjaka nandimby azy. Ary namely ny Midianita tany amin'ny tany Moaba. Ny anaran'ny tanànany Avita.
1:47 Ary rehefa maty koa Hadada, Samla avy any Masreka no nanjaka nandimby azy.
1:48 Ary maty Samla koa, ary Saoly avy any Rehobota, izay no misy afa-tsy ny renirano, no nanjaka nandimby azy.
1:49 Saoly koa satria maty, Fanararaotana ankizy, ny zanak'i Akbora, no nanjaka nandimby azy.
1:50 Ary maty koa izy, ary Hadara no nanjaka nandimby azy. Ary ny anaran'ny tanànany dia Pau. Ary ny vadiny dia Mehetabela hoe, zanakavavin'i Matreda, ny zanakavavin'i Me-zahaba.
1:51 Ary rehefa maty Hadara, nanomboka nisy komandin'ny tany Edoma nandimby mpanjaka: Lotan komandy, mpitari-tafika Alvah, mpitari-tafika Jetheth,
1:52 mpitari-tafika Oholibama, mpitari-tafika Elaha, mpitari-tafika Pinon,
1:53 mpitari-tafika Kanez, mpitari-tafika Friend, mpitari-tafika Mibzar,
1:54 mpitari-tafika Magdiela, mpitari-tafika Iram. Ireo no mpifehy Edoma.
2:1 Ary ny Zanak'Isiraely: Reuben, Simeon, Levi, Joda, Isakara, sy Zebolona,
2:2 ary, Joseph, Benjamin, Naftaly, Gad, sy Asera.
2:3 Ary ny zanakalahin'i Joda: dia, Onana, ary Sela. Ireo telo ireo no naterak'i azy avy Batsoa, ny Kananita. fa, ny voalohan-teraky ny Joda, ratsy eo imason'i Jehovah, ary toy izany koa no namono azy.
2:4 Ary Tamara, ny vavy-in-lalàna, niteraka an'i Fareza sy Zera taminy. Noho izany, rehetra ireo no zanakalahin'i Joda dia dimy.
2:5 Ary ny zanakalahin'i Fareza: Hezrona sy Hamola.
2:6 koa, tamin'ny taranak'i Zera: Zimry, sy Ethan, sy Hemana, ary koa ny Kalkola ary Dara, dimy avokoa.
2:7 Ary ny zanakalahin'i Karmy: mahita, izay sahiran-tsaina sy nanota ny Isiraely noho ny halatra ny izay voaozona.
2:8 Ary ny zanakalahin'i Etana dia: Azaria.
2:9 Ary ny zanakalahin'i Hezrona izay naterany: Jeramela, ary Rama, ary Kelobay.
2:10 Dia nanan-anaka Ram Aminadaba. Ary Aminadaba nitoe-jaza Nasona, ny lohan'ny taranak'i Joda.
2:11 koa, Nasona torontoronina Salma, avy izay nitsangana Boaza.
2:12 Marina tokoa, Boaza torontoronina Obed, izay koa dia nanan'anaka Jese.
2:13 Ary Jese nitoe-jaza ny Eliaba, lahimatoa, ny faharoa Abinadaba, Sama no fahatelony,
2:14 Netanela, fahefatra, ny fahadimy sy Raday,
2:15 ny fahenina Ozema, ny fahafito David.
2:16 Ny anabaviny Zeroia sy Abigaila. Ary ny zanakalahin'i Zeroia: Abisay, Joaba, ary Asahela, telo.
2:17 Ary Abigaila nanan'anaka Amasa, izay ny rainy Jatera, ny Ismaelita.
2:18 Marina tokoa, Caleb, zanak'i Hezrona, nampaka-bady atao hoe Azoba, ny izay torontoronina Jeriota. Ary ny zanany, dia Jesher, sy Sobaba, ary Ardona.
2:19 Ary nony maty Azoba efa, No nalain'i Kaleba ho vadiny Efrata, ary izy niteraka an'i Hora taminy.
2:20 Ary nanan-anaka Hora Uri. Ary nanan-anaka Uri Bezalila.
2:21 ary rehefa afaka izany,, Hezrona niditra ny zanakavavin'i Makira, rain'i Gileada. Ary nandray azy rehefa enim-polo taona. Ary izy niteraka an'i Segoba taminy ravehivavy tamin'i.
2:22 Ary avy eo dia nanan'anaka Segoba Jair, Ary nahazo tanàna telo amby roa-polo tany amin'ny tany Gileada.
2:23 Ary nosamboriny Gesora sy Arama, tanàna madinika an'i Jaira, sy an'i Kenata sy ny zana-bohiny, tanàna enim-polo. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Makira, rain'i Gileada.
2:24 Avy eo, rehefa maty Hezrona, Caleb niditra ho any Efrata. koa, Hezrona efa ho vadiny Abia, izay nitondra azy Asora, , razamben'ny any Tekoa.
2:25 Ary ny zanakalahin'i Jeramela, dia nateraka mba, , lahimatoan'i Hezrona: Ram, ny lahimatoa, sy Bona, sy Orena, sy Ozema, ary Ahia.
2:26 Nanambady koa Jeramela vady hafa, atao hoe Atarah, izay ny renin'i Onama.
2:27 Ary koa, ny zanakalahin'i Rama, , lahimatoan'i Jeramela,, dia Maza, Guarantee, ary Ekera.
2:28 Ary Onama nanan-janaka: Samay sy Jada. Ary ny zanakalahin'i Samay: Nadaba sy Abisora.
2:29 Marina tokoa, ny anaran'ny vadin'i Abisora ​​dia Abihaila, izay nitondra ho an'i Abana sy Molida taminy.
2:30 Ary ny zanakalahin'i Nadaba dia Saleda sy Apaima dia. Ary maty momba Saleda.
2:31 Marina tokoa, ny zanakalahin'i Apaima dia Jisy ny. Ary nanan-anaka Jisy dia Sesana. Ary Sesana torontoronina Ahelay.
2:32 Fa ny zanakalahin'i Jada, , rahalahin'i Samay,, dia Jatera sy Jonatana. Ary Jatera maty momba koa.
2:33 Ary Jonatana nanan'anaka Paleta sy Zaza. Ireo no zanakalahin'i Jeramela.
2:34 Ary Sesana tsy nanana zanakalahy, fa ny vavy, ary mpanompo Egyptiana atao hoe Jara.
2:35 Ary dia nomeny azy zananivavy ho vadiny, izay nitondra azy Atahy.
2:36 Ary Atahy torontoronina Nathan, ary nitoe-jaza Nathan Zabada.
2:37 koa, Zabada nitoe-jaza an'i Efiala;, ary Efiala nanan'anaka Obed.
2:38 Obed torontoronina Jeho; Torontoronina Jeho Azaria.
2:39 Azaria torontoronina Haleza, ary Haleza nanan'anaka Elasa.
2:40 Elasa torontoronina Sismai; Sismai torontoronina Saloma.
2:41 Saloma torontoronina Jekamia; Dia nanan-anaka Jekamia Elisama.
2:42 Ary ny zanakalahin'i Kaleba, ny rahalahin'i Jeramela, dia Mesa, ny lahimatoa, izay rain'i Zifa, ary ny zanakalahin'i Mesa, ny razamben'ny any Hebrona.
2:43 Ary ny zanakalahin'i Hebrona dia Kora, ary Tapuah, dia Evy sy Rekema, sy Sema.
2:44 Dia nanan-anaka Sema Rahama, ny rain'i Jorkeam. Ary nanan-anaka Rakema Samay.
2:45 Ary ny zanakalahin'i Samay dia Maona, ary Maona no razamben'ny any Beti-zora.
2:46 Ary Efaha, vaditsindranon'i Kaleba, niteraka an'i Harana, ary Moza, ary Gazeza. Ary nanan-anaka Harana Gazeza.
2:47 Ary ny zanakalahin'i Jeday: mpanjaka, ary Jotama, sy Gesana, sy Jeziela sy Peleta, ary Efaha, ary Safa.
2:48 ary Imaka, vaditsindranon'i Kaleba, niteraka an'i Sabera sy Tirana.
2:49 Ary Safa, , razamben'ny any Madmana, torontoronina Sheva, ny rain'i Machbenah, ary ny razamben'ny any Gibea. Marina tokoa, ny zanakavavin'i Kaleba dia Aksa.
2:50 Izao no zanakalahin'i Kaleba, ny zanak'i Ahoana no, ny voalohan-teraky ny Efrata: Sobala, , razamben'ny any Kiriata-jearima;
2:51 Salma, ny razamben'ny any Betlehema; ः aref, ny rain'i Bethgader.
2:52 Ary nisy taranakareo Sobala, , razamben'ny any Kiriata-jearima, izay nahita ny antsasaky ny toerana fitsaharana.
2:53 Ary avy amin'ny foko Kiriata-jearima: dia ny Jitrita, sy ny Potita, sy ny Somatita, ary ny Misraita. avy amin'ireo, ny Zoraita sy ny Estaolita nivoaka.
2:54 Ary ny zanakalahin'i Salma: Betlehema, sy ny Netofatita, ny satroboninahitra tao an-tranon'i Joaba, ary ny antsasaky ny toerana sisa ny Zoraita,
2:55 ary koa ny fokon'ny mpanoratra monina any Jabesy, izay mihira sy manao mozika, sy izay monina an-day. Ireo no Kenita, izay nivoaka avy tany Calor, ny rain'ny taranak'i Rekaba.
3:1 Marina tokoa, Ireo zanakalahin'i Davida, izay naterany tao Hebrona: ny lahimatoa Amnona, zanak'i Ahinoama Jezirelita; ny faharoa Daniel, avy Abigaila Karmelita;
3:2 ny fahatelo Absaloma, zanak'i Maka, zanakavavin'i Talmay,, mpanjakan'i Gesora; ny fahefatra Adonia, ny zanak'i Hagita;
3:3 ny fahadimy dia Sefatia, Abitala; ny fahenina Jitreama, avy ny vadiny Egla.
3:4 Noho izany, Ireo enina ireo no naterany tao Hebrona, izay nanjakany fito taona sy enim-bolana. Avy eo kosa no nanjakany telo amby telo-polo taona no nanjakany tany Jerosalema.
3:5 Ary tany Jerosalema, zanany naterany: Samoa, ary Sobab, sy Natana, ary Solomona, efatra ireo from Batseba, ny zanakavavin'i Amiela;
3:6 koa ny barany sy Elisama,
3:7 ary Elifeleta, sy Noga, sy Noga sy Nafega, sy Jafia,
3:8 koa tokoa Elisama, sy Eliada, ary Elifeleta, sivy.
3:9 Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Davida, ankoatra ny zanak'ireo vaditsindranony hafa. Ary izy nanana rahavavy, Tamar.
3:10 Ary ny zanakalahin'i Solomona dia Rehoboama, avy izay nanan-anaka Abia zazalahy, toy izany. Ary avy aminy, nisy teraka Josafata,
3:11 ny rainy Jehorama,. Ary Jorama nanan-anaka Ahazia, avy izay niteraka Joasy.
3:12 Sy ny Zanany, Amazia, torontoronina Azaria. Ary Jotama, ny zanak'i Azaria,
3:13 torontoronina Ahaza, ny rain'i Hezekia, avy izay teraka Manase.
3:14 Ary koa, Manase torontoronina Amona, ny rain'i Josia.
3:15 Ary ny zanakalahin'i Josia dia ireo: Johanana, lahimatoa, ny faharoa Joiakima, ny fahatelo Zedekia, Saloma, faralahy.
3:16 Avy amin'i Joiakima dia Jekonia, ary Zedekia teraka.
3:17 Ary ny zanakalahin'i Jekonia ny babo teo: Sealtiela,
3:18 Malkirama, Pedaia, Senazara, ary Jekamia, Hosama, ary Nedabia.
3:19 avy Pedaia, dia nitsangana Zerobabela sy simey. Torontoronina Zerobabela dia Mesolama, Hanania, ary ny anabaviny Selomita,
3:20 ary koa ny Hasoba, sy Ohela, ary Berekia, sy Hasadia, Josaba-heseda, dimy.
3:21 Ary ny zanakalahin'i Hanania dia Pelatia ny, ny rain'i Jesaia, izay zanakalahin'i Refaia. Sy ny Zanany dia Arnan, avy izay teraka Obadia, izay zanakalahin'i Sekania.
3:22 Ary ny zanakalahin'i Sekania dia Semaia avy, izay ny zanany, dia ireo: Hatosy, sy Jigala, sy Baria, sy Nearia, ary Safata, enina isa.
3:23 Ary ny zanakalahin'i Nearia: Elioenay, ary Hizkiaj, ary Azrikama, telo.
3:24 Ary ny zanakalahin'i Elioenay: Hodavia, ary Eliasiba, ary Pelaia, sy Akoba, ary Johanana, sy Delaia, ary Anany, Fito.
4:1 Ary ny zanakalahin'i Joda: Perez, Hezrona, ary Karmy, ary Ahoana no, ary Sobala.
4:2 Marina tokoa, Reaia, , zanakalahin'i Sobala,, torontoronina Jahata; avy aminy no teraka Ahomay sy Lahada. Ireo no ho havan'ny ny Zoraita.
4:3 Ary izao no tahiry mitresaka any Etama: Jezirela, sy Jisma, ary Jidbasy. Ary ny anaran'ny anabaviny dia Hazzelelponi.
4:4 Ary i Penoela, rain'i Gedora, ary Ezera no rain'i Hosa. Ireo no zanak'i Hora, ny voalohan-teraky ny Efrata, ny razamben'ny any Betlehema.
4:5 Marina tokoa, for Asora, , razamben'ny any Tekoa, nisy vehivavy roa: Fitaka sy ny homamiadana.
4:6 Ary Nara niteraka taminy: Ahuzzam, sy Hefera, sy Temeny, ary Hahastary. Ireo no zanakalahin'i Nara.
4:7 Ary ny zanakalahin'i Hela dia Zareta ny, Jizara, ary Etnana.
4:8 Ary Hakoza torontoronina Anub, sy Zobeba, ary ny foko Aharela, ny zanakalahin'i Haroma.
4:9 Fa Jabeza dia nalaza, mihoatra noho ny rahalahiny, ary ny reniny nanao ny anarany Jabeza, nanao hoe:, "Fa niteraka azy amin'ny fahoriana ianareo."
4:10 Marina tokoa, Jabeza niantso an'Andriamanitry ny Isiraely, nanao hoe:, "Raha, rehefa mitso-drano, dia hitahy ahy, ka hanitatra ny fari-taninao, ary ny tananao ho amiko, ka dia hahatonga ahy tsy ho azon'ny herin'ny ratsy. "Ary Andriamanitra nanome azy ny zavatra izay nivavaka.
4:11 Ary Keloba, ny rahalahin'i Shuhah, torontoronina Mehir, izay ny rain'i Estona.
4:12 Dia nanan-anaka Estona Bethrapha, sy Pasea, ary Tehina, ny rain-tanànan 'i Nahasy. Ireo no mponina tao Recah.
4:13 Ary ny zanakalahin'i Kenaza dia Otniela ny sy Seraia. Ary ny zanakalahin'i Otniela dia Hathath Ary Meonotahy.
4:14 Meonotahy torontoronina Ofra, Fa Seraia torontoronina Joaba, ny ray ao an-dohasahan'ny mpanao asa tanana. Fa tokoa, nisy mpanao asa tanana any.
4:15 Marina tokoa, ny zanak'i Keloba, ny zanak'i Jefone, dia Iro, ary Elaha, ary Name. Ary ny zanakalahin'i Elaha: Kenaza.
4:16 koa, ny zanakalahin'i Jehalalila: Zifa sy Zifaha, Tiria ary Asarel.
4:17 Ary ny zanakalahin'i Ezrah: Jatera, sy Mareda, sy Efera, ary Jalona; ary torontoronina Miriam, sy Samay, ary Ishbah, , razamben'ny any Estemoa.
4:18 Ary avy eo ny vadiny, Judaia, niteraka Jered, ny rain'i Gedora, sy Hebera, , razamben'ny any Soko, ary Jekuthiel, , razamben'ny any Zanoa. Ary nisy zanakalahin'i Bitia, ny zanakavavin'i Farao, izay nanambady Mareda,
4:19 Ary ny zanakalahin'i Hodia vadiny, izay anabavin'i Nahama, ny razamben'ny an'i Keila Garmita, ary any Estemoa, avy any Maacathi.
4:20 Ary ny zanakalahin'i Simona: Amnona, sy Rina, zanak'i Hanana, ary Tilona. Ary ny zanakalahin'i Jisy: Zoheta sy Ben-zoheta.
4:21 Ary ny zanakalahin'i Sela, ny zanak'i Joda,: dia, ny rain'i Leka, sy Lada, , rain'i Maresa, ary ny foko tao an-tranon'i ny mpanao rongony fotsy madinika tao an-tranon'i ny fianianana,
4:22 ary izay nahatonga ny masoandro mba mijanona, ary ny mponina tao mandainga, ka tsy manana ahiahy, ary nafana, izay mpitarika any Moaba, ary niverina ho any Betlehema. Ary ireo teny ireo fahiny.
4:23 Ireo no mpanefy vilany monina any amin'ny fambolena sy ny Hedges, miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny asany, ka dia nonina tao.
4:24 Ny taranak'i Simeona,: Nemoela sy Jamina, Jariba, Zera, Saoly;
4:25 Saloma no zanakalahin'i, Mibsama no zanakalahin'i, Misma no zanakalahin'i.
4:26 Ary ny zanakalahin'i Misma: Hammuel zanany, Zakora zanany, Simey no zanakalahin'i.
4:27 Ary ny zanakalahin'i Simey dia enina ambin'ny folo, ary nisy enim-bavy. Fa ny rahalahiny tsy nanana zanakalahy maro, ary ny foko manontolo dia tsy mitovy ny isa ny taranak'i Joda,.
4:28 Izao izy ireo dia nonina tany Beri-sheba, sy Molada, ary Hazarshual,
4:29 ary in Bila, sy Azema, ary in Tolada,
4:30 ary in Betoela, ary ao Horma, ary tany Ziklaga,
4:31 sy Beti-markabota, ary in markabota, ary in Bethbiri, sy Saraima. Ireo no tanàna nonenany mandra-Davida mpanjaka.
4:32 Ary ny zana-bohiny dia Etama, ary Aina, Rimona, sy Tokena, ary Asana, tanàna dimy,
4:33 amin'ny zana-bohiny rehetra, manodidina ireo tanàna, ka hatrany Bala. Izany no ny fonenany sy ny fizarana ny tanàna kely.
4:34 Ary nisy Mesobaba sy Jamleka, sy Josa, ny zanak'i Amazia,
4:35 sy Joela, ary Jeho, ny zanak'i Josibia, ny zanak'i Seraia, ny zanak'i Asiel,
4:36 ary Elioenay, ary Jaakobah, ary Jeshohaiah, ary Asaia, sy Adiela, sy Jesimiela, ary Benaia,
4:37 ary koa ny Ziza, ny zanak'i Sify, ny zanak'i Alona, ny zanak'i Jedaia, ny zanak'i Simry, ny zanak'i Semaia.
4:38 Ireo no anaran'ny mpitarika ao amin'ny havanao. Ary izy ireo hitomboany betsaka ao amin'ny trano ny fanambadiana.
4:39 Dia niainga, mba hahazoany miditra ao Gedora, hatrany amin'ny atsinanana lohasaha, ary toy izany koa mba hahazoany mitady kijana ho an'ny ondriny aman'osiny.
4:40 Ary nahita ahitra sy ny kijana tsara indrindra, ary be ny sakany sy tony sy tany mahavokatra ho tanin, izay ny sasany avy amin'ny tahiry Hama efa niaina talohan'ny.
4:41 Koa dia, ireo manana ny anarany voasoratra etsy ambony, nivoaka tamin'ny andron'i Hezekia, ny mpanjakan'ny Joda,. Ary izy ireo namely ny mponina izay efa hita ao amin'ny fonenany. Ary namaoka azy avy, na dia hatramin'ny andro ankehitriny. Ary nonina nandimby ireo, satria nahita matavibe kijana any.
4:42 koa, ny sasany tamin'ny taranak'i Simeona, diman-jato lahy, nandeha an-tendrombohitra Seira, manana ho mpitarika Pelatia sy Nearia sy Refaia ary Oziela, ny zanakalahin'i Jisy.
4:43 Ary namely ny sisa amin'ny Amalekita, ireo izay afaka ho afa-mandositra, ka nonina teo nandimby azy, mandraka androany.
5:1 koa, nisy ny taranak'i Robena, ny voalohan-teraky ny Isiraely. Fa tokoa, izy no lahimatoa, fa rehefa nandika ny fandriam-drainy, ny zony amin'ny maha lahimatoa dia nomena ny zanak'i Josefa,, ny zanak'i Isiraely, ka dia tsy malaza toy ny lahimatoa.
5:2 Koa, Joda, izay mahery indrindra amin'ny rahalahiny, avy amin'ny tahiry mpitarika niseho, fa ny tsara dia ny lahimatoa malaza an 'i Joseph.
5:3 Koa dia, ny taranak'i Robena, ny voalohan-teraky ny Isiraely, dia Hanoka sy Palo, Hezrona ary Karmy.
5:4 Ny zanakalahin'i Joela dia: Semaia zanany, Goga zanany, Simey no zanakalahin'i,
5:5 Mika no zanakalahin'i, Reaia no zanakalahin'i, Bala no zanakalahin'i,
5:6 Agriculture ny Zanany, izay Tiglato-pilesera,, ny mpanjakan'i Asyria, nitondra ho babo, ary izy dia mpitarika tao amin'ny fokon'i Robena.
5:7 Ary ny rahalahiny mbamin'ny mpianakaviny rehetra, rehefa ho voaisa araka ny fianakaviany, maha-mpitarika nanana Jeiela sy Zakaria.
5:8 Ary Bela, ny zanak'i Azaza, zanak'i Sema, ny zanak'i Joela, nonina tao Aroera, hatrany Nebo sy Bala-meona.
5:9 Ary ny andro niainan'i hankany amin'ny tany atsinanana, ka hatrany amin'ny fidirana ho any an-efitra sy ny ony Eofrata,. Fa tokoa, dia nahazo maro ny bibiny tany an-tany Gileada.
5:10 Avy eo, tamin'ny andron'i Saoly, dia niady tamin'ny Hagarita izy ka nanao azy ho faty. Ary nonina nandimby ireo, teo amin'ny fonenany, manerana ny faritra manontolo izay manatrika ny atsinanana Gileada.
5:11 Marina tokoa, ny taranak'i Gada nonina tany amin'ny faritra mifanohitra azy, tany amin'ny tany Basana, hatrany Saleka:
5:12 Joela ny lohany, ary Safama no faharoa, Dia Janai sy Safata, any Basana.
5:13 Marina tokoa, ny rahalahiny, araka ny tranon'ny ny havanao, dia: Michael, ary Mesolama, sy Sheba, sy Joray, ary Jakana, sy Zia, ary Ebera, Fito.
5:14 Ireo no zanakalahin'i Abihaila, ny zanak'i Hory, ny zanak'i Jaroa, zanak'i Gileada, ny zanak'i Michael, ny zanak'i Jesisay, ny zanak'i Jado, ny zanak'i Boza,
5:15 miaraka amin'ny rahalahiny, ny taranak'i Abdiel, ny zanak'i Gony, ny mpitarika ny trano, in ny fianakaviany,
5:16 Ary nonina tany Gileada, sy tany Basana sy ny zana-bohiny, ary tamin'ny tany rehetra manodidina ny Sharon, hatrany amin'ny sisintany.
5:17 Ireo rehetra ireo dia nalamina tamin'ny andron'i Jotama, ny mpanjakan'ny Joda,, sy tamin'ny andron'i Jeroboama, ny mpanjakan'ny Isiraely:
5:18 ny taranak'i Robena, sy Gada, ary ny antsasaky ny firenen'i Manase, lehilahy mpiady, mitondra ampinga sy ny sabatra, ary hiondrika ny tsipìka, ary voaofana hiady, efatra arivo amby efa-polo amby fiton-jato sy enim-polo, mandroso ho amin'ny ady.
5:19 Niady mafy izy ireo tamin'ny Hagarita, nefa tena ny Jetureans, ary Nfis, ary Nodaba izy nanolotra fanampiana ho azy ireo.
5:20 Ary ny Hagarita dia natolotra teo an-tanany, ary izay rehetra teo aminy. Fa niantso an 'Andriamanitra izy ireo raha mbola nanao ady. Ary nihaino azy ireo, satria efa natoky azy.
5:21 Ary izy ireo nisambotra izay rehetra nahazo, ny rameva dimy alina, sy ondry aman'osy dimy alina amby roan-jato, ary boriky roa arivo, ary olona iray hetsy fiainana.
5:22 Ary maro no niampatrampatra naratra. Fa avy tamin'i ady 'ny Tompo. Ary nonina nandimby ireo, mandra-transmigration.
5:23 koa, ny zanaky ny iray antsasaky ny firenen'i Manase nandova ny tany, avy any amin'ny faritra Basana ka hatrany Bala, Hermona, ary Sanir, sy ny Tendrombohitra Hermona. Fa tokoa, ny isany dia be.
5:24 Ary izao no mpitarika tao an-tranon'i ny havanao: Efera, sy Jisy, sy Eliala, sy Azriela, ary Jeremia, sy Hodavia ary Jadiela, ary Jadiela, tena mahery sy ny lehilahy mahery, sy ny laza ireo mpitarika ao amin'ny fianakaviany.
5:25 Anefa izy ireo nahafoy ny Andriamanitry ny razany, ary fornicated nanaraka ny andriamanitry ny tompon-tany, Andriamanitra izay nanaisotra ho eo anoloany.
5:26 Ary toy izany ny Andriamanitry ny Isiraely namporisika an'i Pola,, ny mpanjakan'i Asyria, Ary Tiglato-pilesera,, ny mpanjakan'i Asyria. Dia nesoriny Reuben, ary Gada, ary ny antsasaky ny firenen'i Manase. Ary Jesosy nitondra azy ho any Hala, ary ny Habora, ary ny Hara, ary tany amoron'ny ony Gozana ambaraka, mandraka androany.
6:1 Ary ny zanakalahin'i Levy: Gersoma, Kehata, ary Merary.
6:2 Ary ny zanakalahin'i Kehata: Amram, Jizara, Hebron, ary Oziela.
6:3 Ny zanakalahin'i Amrama dia: Aaron, Moses, ary Miriama. Ary ny zanakalahin'i Arona: Nadaba sy Abiho, Eleazara sy Itamara.
6:4 Eleazara torontoronina Finehasa, ary Finehasa nanan'anaka Abisoa.
6:5 Marina tokoa, Boky torontoronina Abisoa, ary nitoe-jaza Boky Ozy.
6:6 Ozy torontoronina Zerahia, ary Zerahia nanan'anaka Meraiota.
6:7 Dia nanan-anaka Meraiota Amaria, ary Amaria nanan'anaka Ahitoba.
6:8 Ahitoba torontoronina Zadoka, ary Zadoka nanan'anaka Ahimaza.
6:9 Ahimaza torontoronina Azaria; Azaria torontoronina Johanana.
6:10 Johanana torontoronina Azaria. Izy no ilay novonoina ny biraon'ny mpisorona tao an-trano naorin'i Solomona tao Jerosalema.
6:11 Ary Azaria torontoronina Amaria, ary Amaria nanan'anaka Ahitoba.
6:12 Ahitoba torontoronina Zadoka, ary Zadoka nanan'anaka Saloma.
6:13 Saloma torontoronina Hilkia, ary nitoe-jaza Hilkia Azaria.
6:14 Azaria torontoronina Seraia, ary Seraia nanan'anaka Jozadaka.
6:15 Ary lasa nandeha Jozadaka, nefa ny Tompo naka ny Joda sy Jerosalema, ny tànan'i Nebokadnezara.
6:16 Ary ny zanakalahin'i Levy dia Gersona ny, Kehata, ary Merary.
6:17 Ary izao no anaran'ny zanakalahin'i Gersona: Libny sy Simey.
6:18 Ary ny zanakalahin'i Kehata: Amram, sy Jizara, ary Hebrona, ary Oziela.
6:19 Ary ny zanakalahin'i Merary: Dia Maly sy Mosy. Ary toy izao no foko Levy, araka ny fianakaviany.
6:20 Gersona: Libny no zanakalahin'i, Jahata zanany, Zima zanany,
6:21 Joa zanany, Maha-Zanany Azy, Zera zanany, Jeatherai zanany.
6:22 Ary ny zanakalahin'i Kehata: Aminadaba zanany, Kora no zanakalahin'i, Asira zanany,
6:23 Elkana no zanakalahin'i, Abiasafa zanany, Asira zanany,
6:24 Tahata no zanakalahin'i, Oriela no zanakalahin'i, Ozia no zanakalahin'i, Saoly zanany.
6:25 Ary ny zanakalahin'i Elkana: Amasay sy Ahimoth
6:26 ary Elkana. Ary ny zanakalahin'i Elkana: Zophai zanany, Nahata zanany,
6:27 Eliaba no zanakalahin'i, Jerohama zanany, Elkana no zanakalahin'i.
6:28 Ary ny zanakalahin'i Samoela: Vasseni ny lahimatoa, ary Abia.
6:29 Ary ny zanakalahin'i Merary dia: Maly, Libny no zanakalahin'i, Simey no zanakalahin'i, Oza no zanakalahin'i,
6:30 Simea no zanakalahin'i, Haggiah zanany, Asaia zanany.
6:31 Ireo no ireo izay notendren'i Davida ho tonian'ny hira lehilahy ao an-tranon'i Jehovah, any amin'ny tany izay nisy ny fiaran'Andriamanitra dia hita.
6:32 Ary nanao fanompoam-pivavahana eo anoloan'ny trano-lain'ny Vavolombelona fihobiana, mandra Solomona ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema. Ary izy ireo dia mijoro araka ny filaminana eny amin'ny fanompoana.
6:33 Marina tokoa, Ireo no ireo izay manampy, mbamin'ny zanany, avy tamin'ny taranak'i Kehata: ny mpihira Hemana, ny zanak'i Joela, ny zanak'i Samoela,
6:34 ny zanak'i Elkana, ny zanak'i Jerohama, ny zanak'i Eliel, ny zanak'i Toah,
6:35 ny zanak'i Zofa, ny zanak'i Elkana, ny zanak'i Mahata, ny zanak'i Amasay,
6:36 ny zanak'i Elkana, ny zanak'i Joela, ny zanak'i Azaria, ny zanak'i Zefania,
6:37 ny zanak'i Tahata, ny zanak'i Asira, zanak'i Abiasafa, ny zanak'i Kora,
6:38 ny zanak'i Jizara, ny zanak'i Kehata, zanak'i Levy, ny zanak'i Isiraely.
6:39 Ary nisy koa ny rahalahiny, Asafa, izay nitsangana teo an-jo, Asafa, ny zanak'i Berekia, , zanak'i Simea,
6:40 ny zanak'i Michael, ny zanak'i Baaseiah, ny zanak'i Malkia,
6:41 ny zanak'i Ethni, ny zanak'i Zera, ny zanak'i Adaia,
6:42 ny zanak'i Etana, ny zanak'i Zima, ny zanak'i Simey,
6:43 ny zanak'i Jahata, ny zanak'i Gersoma, zanak'i Levy.
6:44 Ary ny zanakalahin'i Merary, ny rahalahiny, teny amin'ny ankavia: Ethan, ny zanak'i Kishi, ny zanak'i Abdia, ny zanak'i Maloka,
6:45 zanak'i Hasabia, ny zanak'i Amazia, ny zanak'i Hilkia,
6:46 ny zanak'i Amzy, ny zanak'i Boni, zanak'i Samera,
6:47 ny zanak'i Maly, ny zanak'i Mosy, ny zanak'i Merary, zanak'i Levy.
6:48 Nisy ihany koa ny rahalahiny, Levita izay voatendry ho an'ny fanompoana rehetra ao amin'ny tabernakelin'ny trano-tranon 'ny Tompo.
6:49 Marina tokoa, Arona sy ny zanany dia nandoro fanatitra teo ambonin'ny alitara ny sorona dorana sy teo ambonin'ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra ny, fa ny asa iray manontolo ny Masina Indrindra, ary hivavaka ho an'ny Isiraely, araka ny zavatra rehetra izay Mosesy, ny mpanompon'Andriamanitra, efa nampianatra.
6:50 Ary izao no taranak'i Arona: Eleazara zanany, Finehasa zanany, Abisoa no zanakalahin'i,
6:51 Boky zanany, Ozy no zanakalahin'i, Zerahia no zanakalahin'i,
6:52 Meraiota no zanakalahin'i, Amaria no zanakalahin'i, Ahitoba no zanakalahin'i,
6:53 Zadoka no zanakalahin'i, Ahimaza zanany.
6:54 Ary izao no fonenany araka ny tanàna sy ny voatsapa, manokana avy tamin'ny taranak'i Arona, araka ny havanao ny Kehatita. Fa nianjera ho azy ireo tamin'ny filokana.
6:55 Ary noho izany, Hebrona dia nomeny, ao amin'ny tanin'ny Joda,, sy ny tany manodidina azy manodidina, ho azy ireo,
6:56 fa nomeny ny saha momba ny tanàna, ary ny zana-bohiny, an'i Kaleba, ny zanak'i Jefone.
6:57 Avy eo, ho an'ny taranak'i Arona, dia nomeny ny tanàna fandosirana: Hebron, ary Libna sy ny tany manodidina azy,
6:58 koa Jatira sy Estemoa sy ny tany manodidina azy, Ary koa Hilen ary Debira sy ny tany manodidina azy,
6:59 ary koa ny Asana sy Beti-semesy sy ny tany manodidina azy.
6:60 Ary avy tamin'ny firenen'i Benjamina: Geba sy ny tany manodidina azy, ary Alemeta sy ny tany manodidina azy, ary koa Anatota sy ny tany manodidina azy. Ny tanàna rehetra mandritra ny havanao dia telo ambin'ny folo.
6:61 Ary ny zanakalahin'i Kehata, izay sisa avy any amin'ny havanao, dia nomeny tanàna folo, avy tamin'ny antsasaky ny firenen'i Manase, ho zara-tany;
6:62 ary tamin'ny taranak'i Gersona, araka ny fianakaviany, avy amin'ny fokon'i Isakara, ary avy tamin'ny firenen'i Asera, ary avy tamin'ny firenen'i Naftaly, ary avy tamin'ny firenen'i Manase any Basana: tanàna telo ambin'ny folo.
6:63 Ary ny taranak'i Merary, araka ny fianakaviany, avy tamin'ny firenen'i Robena, ary avy tamin'ny firenen'i Gada, ary avy tamin'ny firenen'i Zebolona, Dia nomeny tamin'ny filokana dia tanàna roa ambin'ny folo.
6:64 koa, ny zanak'i Isiraely dia nanome, ny Levita, tanàna izao sy ny tany manodidina azy,
6:65 ka nomeny tamin'ny filokana, avy tamin'ny firenena taranak'i Joda,, ary avy tamin'ny firenena taranak'i Simeona, ary avy tamin'ny firenena taranak'i Benjamina, ireo tanàna ireo, izay antsoina amin'ny anarany.
6:66 Ary ho an'ireo izay avy amin'ny havan'ny taranak'i Kehata, ireo tanàna ireo sy ny kobany ireo dia avy amin'ny fokon'i Efraima.
6:67 Dia nomeny azy ny tanàna fialokalofana: Sekema sy ny tany manodidina azy amin'ny tany havoan'i Efraima, ary Gazera sy ny tany manodidina azy,
6:68 ary koa Jokmeam sy ny tany manodidina, ary toy izany koa Beti-horona,
6:69 ary Hilen tokoa ny tany manodidina azy, sy Gata rimona ao amin 'ny fomba.
6:70 Ary koa, avy tamin'ny antsasaky ny firenen'i Manase: Anera sy ny tany manodidina azy, Bileama sy ny tany manodidina azy; indrindra indrindra ireo nandeha tany ireo izay sisa avy any amin'ny havanao tamin'ny taranak'i Kehata.
6:71 Ary ny taranak'i Gersona, avy amin'ny foko iray tamin'ny antsasaky ny firenen'i Manase: Golana, any Basana, sy ny tany manodidina azy, ary Astarta sy ny tany manodidina azy;
6:72 avy amin'ny fokon'i Isakara: Kadesy sy ny tany manodidina azy, ary Daberata sy ny tany manodidina azy,
6:73 ary koa Ramota sy ny tany manodidina azy, ary Anema sy ny tany manodidina azy;
6:74 tena, avy tamin'ny firenen'i Asera: Mashal sy ny tany manodidina azy, sy Abdona toy izany koa;
6:75 ary koa Hukkok sy ny tany manodidina azy, ary Rehoba sy ny tany manodidina azy;
6:76 koa, avy tamin'ny firenen'i Naftaly: Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy, Hamona sy ny tany manodidina azy, ary Kiriataima sy ny tany manodidina azy.
6:77 Ary ny sisa tamin'ny taranak'i Merary, avy tamin'ny firenen'i Zebolona: Rimmono sy ny tany manodidina azy, ary Tabara sy ny tany manodidina azy;
6:78 ary koa, ampitan'i Jordana tandrifin'i Jeriko, miatrika ny atsinanan'i Jordana, avy tamin'ny firenen'i Robena: Dia Bazera any an-efitra sy ny tany manodidina azy, ary Jahzah ny tany manodidina azy;
6:79 ary koa Kedemota sy ny tany manodidina azy, ary Mefata sy ny tany manodidina azy;
6:80 tokoa koa, avy tamin'ny firenen'i Gada: Ramota any Gileada sy ny tany manodidina azy, ary Mahanaima sy ny tany manodidina azy;
6:81 avy eo koa, Ary Hesbona sy ny tany manodidina azy, ary Jazera sy ny tany manodidina azy.
7:1 Ary ny zanakalahin'i Isakara dia Tola sy Poa, Jasoba ary Simrona, efatra.
7:2 Ary ny zanakalahin'i Tola: Ozy, ary Refaia, sy Jeriela, ary Jahmai, ary Ibsam, ary Semoela, mpitarika araka ny tranon'ny ny havanao. Avy amin'ny fototr'isiraely Tola, dia voalamina, tamin'ny andron'i Davida, roa arivo amby roa-tena enin-jato lahy matanjaka.
7:3 Ary ny zanakalahin'i Ozy: Jizrahia, avy izay naterany: Michael, ary Obadia, sy Joela, ary Jisia; dimy no mpitarika.
7:4 Ary naman'ireo, araka ny fianakaviany sy ny firenena, nisy enina arivo amby telo-polo lahy matanjaka indrindra, misikina hiady. Ary maro vady sy ny ankizy.
7:5 koa, ny rahalahiny, ny foko rehetra manerana an'i Isakara, voalamina ho fito arivo amby valo-, tena mendrika ho an'ny ady.
7:6 Ary ny zanakalahin'i Benjamina: tsara tarehy, sy Bakera, sy Jediaela, telo.
7:7 Ary ny zanakalahin'i Bela: Ezbona, ary Ozy, ary Oziela, sy Jerimota ary IRI, dimy mpitarika ny fianakaviana, koa tena mendrika ho an'ny ady; ary ny isany amby roa-polo amby telo-roa arivo efatra.
7:8 Ary ny zanakalahin'i Bakera: Zemira, ary Joasy, ary Eliezera:, ary Elioenay, ary Omry, sy Jeremota, ary Abia, ary Anatota, ary Alemeta: ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Bakera.
7:9 Ary izy ireo araka ny fianakaviany, ny mpitarika ny havanao, tena matanjaka amin'ny ady, amby roa arivo sy roa alina.
7:10 Ary ny zanakalahin'i Jediaela: Bilhan, ary ny zanakalahin'i Bilana: Jeosy, ary Benjamina, sy Ehoda, sy Kenana, sy Zetana, sy Tarsisy, ary Ahisahara.
7:11 Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Jediaela, ny mpitarika ny havanao, lehilahy mahery dia mahery, fito arivo sy roa alina, mivoaka hiady.
7:12 koa, Sopima sy Hopima, ny taranak'i Ir; ary Hosima, zanakalahin'i Ahera.
7:13 Ary ny zanakalahin'i Naftaly: Jaziela, sy Gony, sy Jezera, ary Saloma, zanak'i Bila.
7:14 koa, , zanak'i Manase,: Asriela. Ary ny vaditsindranony, Syriana, Makira niteraka, ny rain'i Gileada.
7:15 Ary Makira naka vady ho an'ny zanany, Hopima sy Sopima;. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Imaka; fa ny anaran'ny manarakaraka dia Zelofada, sy zanakavavy koa naterak'i Zelofada.
7:16 ary Imaka, , vadin'i Makira,, niteraka zazalahy, dia nataony hoe ny anarany Peresh. Ary ny anaran'ny rahalahiny Saresy. Ary ny zanany dia Olama sy Rakema.
7:17 Ary ny zanak'i Olama: Bedana. Izao no taranak'i Gileada, ny zanak'i Makira, , zanak'i Manase,.
7:18 Ary ny anabaviny, Regina, niteraka Ishhod, sy Abiezera, ary Mahala.
7:19 Ary ny zanakalahin'i Semida dia Ahiana ny, sy Sekema, sy Liky ary Aniama.
7:20 Ary ny zanakalahin'i Efraima: Sotela, Bareda zanany, Tahata no zanakalahin'i, Eleadah zanany, Tahata no zanakalahin'i, izay zanakalahin'i Zabada,
7:21 sy ny Zanany dia Sotela, ary ny zanakalahin'i Ezera, ary koa Elead. Fa ny lehilahy teratany an'i Gata namono azy ireo, satria nidina mba hanafika ny fananany.
7:22 Ary toy izany koa ny rainy, Efraima, nisaona nandritra ny andro maro; sy ny rahalahiny tonga, ka dia mba hampionona azy.
7:23 Ary niditra ny vadiny; dia nanan'anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy. Ary ny anarany nataony hoe Beria, satria nitsangana nandritra ny andro ahitan-doza ho an'ny an-tranony.
7:24 Ary ny zananivavy dia Sera, izay nanorina ambany sy Beti-horona ambony, ary koa Ozena-sera.
7:25 Ary Rephah no zanany, ary Resheph, ary efa, avy izay teraka Tahana,
7:26 niteraka Ladan. Ary ny zanakalahin'i Amihoda, niteraka Elisama,
7:27 avy izay teraka Nona, izay nanana an'i Josoa toy ny zanaka.
7:28 Ary ny taniny sy ny fonenany dia: Betela sy ny vavy, sy ny atsinanana, Naaram, ary ny eo amin'ny andrefana faritra, Gazera sy ny zananivavy, ary koa Sekema sy ny vavy, hatrany Ayyah sy ny vavy;
7:29 koa, afa-tsy ny taranak'i Manase, Beti-sana sy ny zananivavy, Tanaka sy ny zananivavy, Megido sy ny vavy, Dora sy ny vavy. Ao amin'ny toerana ireny, dia nipetraka ny taranak'i Josefa, ny zanak'i Isiraely.
7:30 Ary ny zanak'i Asera: Jimna, sy Jisva, sy Jisvy, ary Beria, ary Sera no anabavin'ireo.
7:31 Ary ny zanakalahin'i Beria: Heber, sy Malkiela, dia izy no rain'i Birzaith.
7:32 Ary Hebera torontoronina Jafleta, sy Somera, sy Hotama, ary ny anabaviny Soa.
7:33 Ary ny zanakalahin'i Jafleta: dian-kapoka, sy Bimala, ary Asvata; Ireo no zanakalahin'i Jafleta.
7:34 Ary ny zanakalahin'i Somera: ahi, sy Rohaga, sy Hoba, ary Arama.
7:35 Ary ny zanakalahin'i Helema, rahalahiny: Zofa, sy Jimna, sy Selesy, ary Amal.
7:36 Ny zanakalahin'i Zofa dia: Soha, Harnefera, sy Soala, ary Omeo, sy Jimra,
7:37 Bezera, sy Hoda, sy Sama, sy Silsa, sy Jitrana, ary Bera.
7:38 Ary ny zanakalahin'i Jatera: Jefone, sy Pispa, ary Ara.
7:39 Ary ny zanakalahin'i Ulla: tari-dalana, sy Haniela, ary Rizia.
7:40 Ireo rehetra ireo no taranak'i Asera,, ny mpitarika ny fianakaviana, olom-boafidy sy ny mpitondra mahery indrindra amin'ny mpanapaka. Ary ny isan'ny olona izay iray taona izay mendrika ho an'ny ady enina amby roa-polo arivo.
8:1 Ary Benjamina nitoe-jaza ho Bela, lahimatoa, Sy Asbela, lahiaivo, Ahara, fahatelo,
8:2 Sy Noha, fahefatra, ary Rafa, faralahy.
8:3 Ary ny zanakalahin'i Bela dia: Adara, ary Gera, sy Abihoda,
8:4 ary koa ny Abisoa, sy Namana, sy Ahoa,
8:5 Avy eo koa Gera, sy Sefofana, ary Horama.
8:6 Ary izao no zanakalahin'i Ehoda, mpitarika ny havanao velona any Geba, izay nifindra ho any Manahata.
8:7 ary Namàna, ary Ahia, ary Gera, izy azy koa nifindra; ka dia nanan-anaka Oza sy Ahihoda izy.
8:8 Ary Saharaima torontoronina, tao amin'ny faritr'i Moaba, rehefa nony efa nampody Hosima sy Bara, ny vadiny;
8:9 ary noho izany, ny vadiny Hodesy, dia torontoronina Jobaba, sy Ziba, sy Mesa, sy Malkama,
8:10 ary koa Jeoza sy Sachia, ary Mirma. Ireo no zananilahy, ny mpitarika ny fianakaviany.
8:11 Marina tokoa, Hosima no torontoronina Abitoba sy Elpala.
8:12 Ary ny zanakalahin'i Elpala dia Ebera ny, sy Misama, ary Samera, izay nanorina an'i Ono sy Loda sy ny vavy.
8:13 Ary Beria ary Sema no mpitarika ny fianakaviana monina ao Aialona; ireo nataony vaky nandositra ny mponina tao Gata.
8:14 ary Ahio, sy Sasaka, sy Jeremota,
8:15 ary Zebadia, sy Arada, sy Edera,
8:16 ary koa Michael, sy Jispa, sy Joha, no zanakalahin'i Beria.
8:17 Ary Zebadia, ary Mesolama, sy Hizky, sy Hebera,
8:18 sy Jismeray, sy Jizlia, ary Jobaba no zanakalahin'i Elpala.
8:19 Ary Jakima, sy Zikry, sy Zabdy,
8:20 sy Elienay, ary Ziletahy, sy Eliala,
8:21 ary Adaia, sy Beraia sy Simrata, ary Simrata no zanakalahin'i Simey.
8:22 Ary Jispana, ary Ebera, sy Eliala,
8:23 sy Abdona, sy Zikry, sy Hanana,
8:24 sy Hanania, sy Elama, sy Antotia,
8:25 sy Jifdia, ary Penoela no zanakalahin'i Sasaka.
8:26 Ary Samseray, sy Seharia sy Atalia,
8:27 sy Jaresia, ary Elia, ary Zikry no zanakalahin'i Jerohama.
8:28 Ireo no loham-pianakaviana fahiny sy ny mpitarika ny fianakaviana izay nonina tany Jerosalema.
8:29 Ary tao Gibeona, dia nonina Jeiela, ny razamben'ny an'i Gibeona; ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka,
8:30 ary ny zanany lahimatoa dia Abdona, ary avy eo dia, ary Kisy, dia Bala, ary Nadaba,
8:31 dia Gedora, ary Ahio, ary Zecher, ary Miklota.
8:32 Ary Miklota torontoronina Simea. Ary nonina tandrifin'ny rahalahiny tany Jerosalema, sy ny rahalahiny.
8:33 Ary Nera torontoronina Kisy, ary Kisy nanan-anaka Saul. Ary Saoly dia nitoe-jaza Jonathan, ary Malkisoa, sy Abinadaba, ary Esbala.
8:34 Ary ny zanakalahin'i Jonatana dia Meribala; ary Meribala nanan'anaka Mika.
8:35 Ary ny zanakalahin'i Mika dia Pitona ny, sy Maleka, sy Tarea, ary Ahaza.
8:36 Ary Ahaza nanan-anaka Joada. Ary nanan-anaka Joada Alemeta, sy Azmaveta, ary Zimry. Ary nanan-anaka Zimry Moza.
8:37 Ary nanan-anaka Moza Binea, izay zanakalahin'i Rafa, izay teraka Elasa, niteraka Azela.
8:38 Ary nisy enina mirahalahy for Azela, manana ny anarany dia Azrikama, Bokero, Isimaela, Searia, Obadia, sy Hanana. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Azela.
8:39 Ary ny zanakalahin'i Eseka, rahalahiny, dia Olama, lahimatoa, sy Jeosy, lahiaivo, ary Elifeleta, faralahy.
8:40 Ary ny zanakalahin'i Olama dia lehilahy matanjaka indrindra, mitari ny tsipìka teny hery lehibe. Ary nanana zanaka maro sy ny zafikeliny, ka hatramin'ny dimam-polo amby zato. Ireo rehetra ireo no taranak'i Benjamina.
9:1 Ary noho izany, ny Isiraely rehetra natao ho isan'ny. Ary ny isan'ny azy dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'ny Isiraely sy ny Joda. Ary izy ireo dia nentina ho babo tany Babylona noho ny fandikan-dalàna.
9:2 Ary ny voalohany izay nonina tany ny taniny sy ny tanànany avy dia ny ao an-Isiraely, ary ny mpisorona, ary ny Levita, ary ny Netinima.
9:3 Mitoetra any Jerosalema dia ny sasany tamin'ny taranak'i Joda, ary ny avy tamin'ny taranak'i Benjamina, ary koa avy amin'ny taranak'i Efraima sy Manase:
9:4 Otahy, ny zanak'i Amihoda, ny zanak'i Omry,, zanak'i Omry, ny zanak'i Bany, avy tamin'ny taranak'i Fareza, ny zanak'i Joda,.
9:5 Ary avy Silonita: Dia Asay, lahimatoa, sy ny zanany.
9:6 Ary tamin'ny taranak'i Zera: Jeoela, sy ny rahalahiny, sivi-folo amby enin-jato.
9:7 Ary ny avy tamin'ny taranak'i Benjamina: Sllu, ny zanak'i Mesolama, ny zanak'i Hodavia, ny zanak'i Hasenoa;
9:8 sy Jibnia, ny zanak'i Jerohama; ary Elaha, ny zanak'i Ozy, ny zanak'i Mikry; ary Mesolama, ny zanak'i Sefatia, zanak'i Regoela, ny zanak'i Jibnia;
9:9 Ary ny rahalahiny araka ny fianakaviany, dimam-polo amby sivin-jato enina. Ireo rehetra ireo no mpitarika ny havanao, araka ny trano ny razany.
9:10 Ary avy ny mpisorona: Jedaia, Joiariba, sy Jakina;
9:11 ary koa Azaria, ny zanak'i Hilkia, ny zanak'i Mesolama, , zanak'i Zadoka,, zanak'i Meraiota, ny zanak'i Ahitoba, ny mpisoronabe ny tranon'Andriamanitra,;
9:12 Ary Adaia, ny zanak'i Jerohama, ny zanak'i Pasora, ny zanak'i Malkia; ary Masay, ny zanak'i Adiela, ny zanak'i Jazera, ny zanak'i Mesolama, ny zanak'i Meshillemith, ny zanak'i Imera;
9:13 ary koa ny rahalahiny, mpitarika araka ny fianakaviany, fiton-jato amby arivo enim-polo, Tena mahery ny olona traikefa, ho amin'ny asan'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra.
9:14 Dia avy ny Levita: Semaia, ny zanak'i Hasoba, zanak'i Azrikama, zanak'i Hasabia, tamin'ny taranak'i Merary;
9:15 ary Bakbakara koa ny mpandrafitra; ary Galal; sy Matania, ny zanak'i Mika, ny zanak'i Zikry, ny zanak'i Asafa;
9:16 ary Obadia, ny zanak'i Semaia, zanak'i Galala, ny zanak'i Jedotona; ary Berekia, ny zanak'i Asa, ny zanak'i Elkana, izay nonina teo amin'ny fidirana ho any Netôfà.
9:17 Ary ny mpiandry varavarana dia Saloma, sy Akoba, sy Talmona, sy Ahimana; ary ny rahalahiny fa Saloma no mpitarika.
9:18 Fa mandra-pahatongan'ny andro izany, teo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka atsinanana, ny taranak'i Levy nanompo tany amin'ny hifandimby.
9:19 Marina tokoa, Saloma, ny zanak'i Kore, zanak'i Abiasafa, ny zanak'i Kora, sy ny rahalahiny sy ny ankohonan-drainy, ireo Koraita, no tonian'ny asa amin'ny fanompoana ny fitandremana ny vestibules amin'ny tabernakely. Sy ny fianakaviany, in mifandimby, ireo mpiambina ny fidirana mankao an-toby 'ny Tompo.
9:20 Ary Finehasa, ny zanak'i Eleazara, dia ny mpanapaka teo anatrehan'i Jehovah.
9:21 fa Zakaria, , zanak'i Meselemia,, no mpiandry ny vavahady, dia ny tabernakelin'ny Vavolombelona.
9:22 ireo rehetra ireo, voafidy ho mpiandry varavarana ho eo am-bavahady, dia roa ambin'ny folo amby roan-jato. Ary izy ireo dia voasoratra ao ny tanàna, ireo izay David, ary ny mpahita Samuel, voatendry, amin'ny finoana,
9:23 toy ny aminy, toy izany koa mbamin'ny zanany, teo am-bavahadin'ny tranon'i Jehovah sy ny tabernakely, araka ny mifandimby.
9:24 Amin'ny lafiny efatra, nisy mpiandry varavarana, izany hoe, teo amin'ny ilany atsinanan'ny, Ary amin'ny andrefana, ary amin'ny avaratra, Ary amin'ny atsimo.
9:25 Ary ny rahalahiny nitoetra tao an-tanàna, ary tonga teo amin'ny Sabata, indraindray.
9:26 Efatra ireo no nanankinana ny Levita rehetra isan'ny mpiandry varavarana, dia ireo no tonian'ny efi-trano fitehirizana sy ny trano fitehirizana tao an-tranon'i Jehovah.
9:27 Dia nitoetra ny fiaretany tory izy, rehetra lafiny roa amin'ny tempolin'ny Tompo, amin'izay mba, rehefa tonga ny fotoana, mba Vohay ny vavahady isa-maraina.
9:28 Ny sasany avy any amin'ny havanao koa noho ny fanaky ny fanompoana. Fa ny fanaka dia samy nitondra tao ary nentiny avy araka ny isany avy.
9:29 Ny sasany aminy koa no nanankinana ny fitaovana ao amin'ny fitoerana masina; izy ireo niandraikitra ny Lafarinina varimbazaha tsara toto, ary ny divay, ary ny diloilo, ary ny ditin-kazo manitra, ary ny aromatics.
9:30 Ary ny zanaky ny mpisorona namorona ny menaka avy amin'ny aromatics.
9:31 ary Matitia, ny Levita, , lahimatoan'i Saloma Koraita, tao anjara-raharaha ny ireo zavatra izay nandrahoina tao anaty lapoaly.
9:32 Ary ny sasany tamin'ny taranak'i Kehata, ny rahalahiny, no tonian'ny mofo aseho, mba hahafahan'izy ireo hanomana izay vaovao mandrakariva isaky ny Sabata.
9:33 Ireo no mpitarika fanaovam-peo fifaliana ny olona, araka ny fianakavian'ny Levita, izay nitoetra tao amin'ny efi-trano, ka dia mba hanatontosa ny fanompoany mandrakariva, andro sy alina.
9:34 Ary ny lohan'ny Levita, mpitarika araka ny fianakaviany, nitoetra tany Jerosalema.
9:35 Ary tao Gibeona, dia nonina Jeiela, ny razamben'ny an'i Gibeona, ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka.
9:36 Ny zanany lahimatoa dia Abdona, ary avy eo dia, ary Kisy, dia Bala, dia Nera, ary Nadaba,
9:37 ary koa ny Gedora, ary Ahio, ary Zakaria, ary Miklota.
9:38 Ary Miklota torontoronina Simeama. Ireo nonina mifanohitra ny rahalahy tany Jerosalema, sy ny rahalahiny.
9:39 Ary Nera torontoronina Kisy, ary Kisy nanan-anaka Saul. Ary nanan-anaka Saoly Jonatana, ary Malkisoa, sy Abinadaba, ary Esbala.
9:40 Ary ny zanakalahin'i Jonatana dia Meribala. Ary nanan-anaka Meribala Mika.
9:41 Ary ny zanakalahin'i Mika dia Pitona ny, sy Maleka, sy Tarea, ary Ahaza.
9:42 Ary Ahaza nitoe-jaza an'i Jara. Ary nanan-anaka Jara Alemeta, sy Azmaveta, ary Zimry. Dia nanan-anaka Zimry Moza.
9:43 Marina tokoa, Moza torontoronina Binea, na zanak'iza na zanak'iza, Refaia, torontoronina Elasa, avy izay teraka Azela.
9:44 Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy, izay voasoatra: Azrikama, Bokero, Isimaela, Searia, Obadia, Hanan. Ireo no zanakalahin'i Azela.
10:1 Ary ny Filistina niady tamin'ny Isiraely, ary ny lehilahy amin'ny Isiraely nandositra ny Filistina, ary niampatrampatra teny an-tendrombohitra Gilboa ny faty naratra.
10:2 Ary nony efa azon'ny Filistina efa manakaiky, nanenjika an'i Saoly sy ny zanany lahy, dia namely Jonathan, sy Abinadaba, ary Malkisoa, zanakalahin'i Saoly.
10:3 Ary ny ady nitombo ny fanafihana an'i Saoly. Ary ny mpandefa zana-tsipìka nahita azy, ary dia naratra azy amin'ny zana-tsipìka.
10:4 Ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiany: "Unsheathe ny sabatrao, ka vonoy aho. Raha tsy izany, irery tsy mifora irery Ary aoka ho tonga ka hataony fihomehezana. "Fa ny mpitondra ny fiadiany no tsy vonona, rehefa nozoin 'ny tahotra. Ary noho izany, Saoly nandray ny sabany, ary izy namely azy.
10:5 Ary rehefa ny mpitondra ny fiadiany efa nahita izany, manokana, fa maty Saoly, dia izao nianjera tamin'ny sabany koa, dia maty izy.
10:6 Noho izany, maty Saoly, sy ny zanany telo lahy lasa, ary nianjera ny trano iray manontolo, miaraka.
10:7 Ary nony hitan'ny lehilahy amin'ny Isiraely izay nonina tany amin'ny tani-hay efa nahita izany, dia nandositra. Ary satria Saoly sy ny zanany, dia maty, nandao ny tanànany izy ireo ka dia niparitaka, eto sy ery. Ary tonga ny Filistina ka nonina teo aminy.
10:8 Avy eo, amin'ny andro manaraka, nony efa azon'ny Filistina dia maka ny babo ny voavono, dia nahita an'i Saoly sy ny zanany, nandry teo an-tendrombohitra Gilboa.
10:9 Ary nony efa namabo azy, ary efa nanapaka ny lohany, ary nesoriny ny akanjony ny fiadiany, dia naniraka ireo zavatra ireo ho amin'ny tany, ka izy ireo ho entina manodidina, ary aseho any amin'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy sy ny olona.
10:10 Fa ny fiadiany izy ireo nohamasinina tao amin'ilay toerana masina ny andriamaniny, ary ny lohany dia mitovana tao amin'ny tempolin'i Dagona.
10:11 Rehefa hitan'ny mponina tao Jabesi-gileada nandre izany, manokana, izay rehetra nataon'ny Filistina tamin'i Saoly momba,
10:12 tsirairay ny lehilahy mahery nitsangana, ka dia naka ny fatin'i Saoly sy ny zanany. Dia nitondra azy ho any Jabesy. Dia nandevina ny taolany teo ambanin'ilay hazo terebinta izay tao Jabesy. Ary nifady hanina nandritra ny fito andro.
10:13 Izao no maty i Saoly noho ny helony, satria namadika ny didin'ny Tompo izay efa nampianatra, ary kanefa tsy nitandrina azy. ary koa, mihitsy aza izy nanontany vehivavy mpanao fankatovana;
10:14 fa tsy mahatoky ny Tompo. Noho io, dia nahatonga ny fahafatesany, ary nafindra ny fanjakana ho amin'ny David, ny zanak'i Jese.
11:1 Ary ny Isiraely rehetra dia voangona any Davida tao Hebrona, nanao hoe:: "Izahay, fa taolanao sy nofonao.
11:2 koa, omaly sy ny andro mialoha, fony Saoly mbola nanjaka, ianao no mpitarika ny anankiray nivoaka sy niditra teo amin'ny Isiraely. Fa Jehovah Andriamanitrao efa nilaza taminao: 'Ary ny Isiraely oloko niandrasan'ny, ary ianao no ho mpanapaka azy. ' "
11:3 Noho izany, izay rehetra teraka lehibe amin'ny Isiraely nandeha ho any amin'ny mpanjaka tao Hebrona. Ary Davida namorona fifanarahana tamin'ny azy eo anatrehan'ny Tompo. Ary dia nanosotra azy ho mpanjakan'ny Isiraely, araka ny tenin 'ny Tompo, izay nampilazainy ny tanan 'Samuel.
11:4 Ary Davida sy ny Isiraely rehetra nankany Jerosalema. Toy izany koa Jebosa, aiza ny Jebosita, ny mponina amin'ny tany, dia.
11:5 Ary izay nonina tao Jebosa tamin'i Davida: "Ary tsy hiditra eto." Fa Davida nahazo ny batery fiarovana, dia Ziona, izay ao an-tanànan'i Davida.
11:6 Ary hoy izy:, "Na iza na iza no hamely voalohany ny Jebosita,, ho mpanapaka sy komandy. "Ary Ary Joaba, , zanak'i Zeroia,, niakatra voalohany, ka dia nanao ny mpitarika.
11:7 Ary Davida nitoetra tao amin'ny batery fiarovana, ary noho izany antony izany dia nantsoina hoe ny Tanànan'i Davida.
11:8 Ary nandrafitra ny manodidina ny tanàna, hatrany Milo ka hatrany manodidina. Fa Joaba nanao ny sisa tamin'ny tanàna.
11:9 Ary Davida mbola nandroso sy nitombo, Ary Jehovah, Tompon'ny maro, no nomba azy.
11:10 Ireo no mpitarika ny lehilahy mahery Davida, izay nanampy azy, ka dia ho lasa mpanjakan'ny Israely rehetra, araka ny tenin 'ny Tompo, izay niteny tamin'Isiraely.
11:11 Ary izao no isan'ny matanjaka Davida: Jasobeama, zanaky ny Hachmonite, mpitarika eo amin'ny telo-polo. Ary rehefa nanopy ny lefona telo-jato, izay naratra nisy fotoana.
11:12 Ary ny manarakaraka azy, nisy Eleazara, ny zanaky ny dadatoany, Ahohita, izay isan'ny telo lahy mahery ireo.
11:13 Izy dia teo amin'i Davida tao Pasdammim, nony efa azon'ny Filistina nivory ho any amin'io toerana io noho ny ady. Ary ny saha izay faritra feno vary hordea, fa ny olona efa nandositra teo anoloan'ny Filistina.
11:14 Ireo lehilahy nijanona teo afovoan'io any an-tsaha, ary niaro azy io. Ary nony efa namely ny Filistina, nomen'ny Tompo famonjena lehibe ho an'ny vahoakany.
11:15 Dia telo avy amin'ny mpitarika telo-polo nidina nankeo amin'ny vatolampy nonenan'i Davida, nankany amin'ny zohin'i Adolama, nony efa azon'ny Filistina ny nanaovany ny toby tao amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
11:16 Ary Davida dia tao amin'ny batery fiarovana, ary ny miaramilan'ny Filistina kosa tao Betlehema.
11:17 Ary avy eo Davida naniry ka nanao hoe:, "Toy izay anie hisy hampisotro rano ahy avy amin'ny fantsakana ao Betlehema, izay eo am-bavahady!"
11:18 Noho izany, ireo telo namaky hatramin'ny teo amin'ny tobin'ny Filistina, ary nanovo rano avy amin'ny fantsakana ao Betlehema, izay am-bavahady. Dia afany koa izy tamin'i Davida, ka dia mba hisotroan'ny. Nefa izy tsy vonona; ary raha tokony, dia nanatitra azy ho fanatitra aidina ho an'i Jehovah,
11:19 nanao hoe:: "Sanatria amiko, fa hahatonga izany eo imason'ny Andriamanitro, ary izay no hisotro ny ran'ireto olona. Fa dia mampidi-doza ny ainy, dia nentiny ny rano ahy. "Ary noho izany antony, dia tsy nety nisotro. Ny telo mahery vaika indrindra nahavita ireo zavatra ireo.
11:20 koa, Abisay, , rahalahin'i Joaba,, dia ny mpitarika ny telo, Ary tamin'ny lefona hanohitra ny telo-jato, izay naratra. Ary izy no nalaza indrindra teo amin'ny telo,
11:21 ary izy dia malaza eo amin'ny faharoa telo sy ny mpitarika. Na izany aza tena, dia tsy hahatratra hatrany amin'ny telo voalohany.
11:22 Benaia, ny zanak'i Joiada, from Kabzela, dia tena matotra ny olona, izay efa nahavita asa maro. Ary namely ny liona roa 'Andriamanitra avy any Moaba. Dia nidina ka namono ny liona eo afovoan'ny lavaka, amin'ny andro oram-panala.
11:23 Ary namono lehilahy Egyptiana, izay lava tsanganana dimy hakiho, ary nisy lefona tahaka ny vodi-tenon'ny mpanenona. Kanefa dia nidina ho azy amin'ny tehina. Ary nosamboriny ilay lefona izay dia nihazona teny an-tànany. Ary izy namono azy iny lefony iny ihany.
11:24 Izany zavatra izany no nataon'ny Benaia, ny zanak'i Joiada, izay tena nalaza teo amin'ny olona telo lahy matanjaka,
11:25 ny voalohany teo amin'ny telo-polo. Na izany aza tena, dia tsy hahatratra hatrany amin'ny telo. Ary Davida napetrany azy afa-tsy ny sofiny.
11:26 Koa, ny matanjaka miaramila dia Asahela, , rahalahin'i Joaba,; ary Elanana, ny zanaky ny dadatoany, avy any Betlehema;
11:27 sy Samota, ny Harorita; Haleza, ny Pelonita;
11:28 Ira, ny zanak'i Ikkesh, ny Tekoite; Abiezera, ny Anatotita;
11:29 sy Sibekay, ny Hosatita; Ilai, Ahohita;
11:30 sy Maharay, ny Netofatita; Heleda, ny zanak'i Bana, ny Netofatita;
11:31 Itha, , zanak'i Ribay,, avy any Gibea, ny avy tamin'ny taranak'i Benjamina; Benaia, avy any Piratona;
11:32 Jiosy, avy any amin'ny lohasahan-driaka driak'i Gasy; Abiel, ny Arbatita; Azmaveta, ny Baharumite; Eliaba, ny Salbonita.
11:33 Sy ny zanak'i Hasema, ny Gizonita: Jonathan, ny zanak'i Shagee, Hararita;
11:34 sy Ahiama, ny zanak'i Sachar, Hararita;
11:35 Imphal, ny zanak'i Ora;
11:36 Hefera, ny Mecherathite; Ahia, ny Pelonita;
11:37 Hazro, ny Karmelita; Nhra, ny zanak'i Ezbay;
11:38 Joel, ny rahalahin'i Natana; sy Mibara, ny zanak'i Hagri;
11:39 sy Zaleta, Amonita; Naray, ny Berotita, mpitondra ny fiadian'i Joaba, , zanak'i Zeroia,;
11:40 Ira, Jitrita; Gareba, Jitrita;
11:41 Oria, ny Hetita; Zabada, ny zanak'i Ahelay;
11:42 Adina, ny zanak'i Siza, ny Robenita, ny mpitarika ny Robenita, ary telo-polo izay niaraka taminy;
11:43 Hanan, zanak'i Maka; sy Josafata, ny Mitnita;
11:44 Ozia, ny Astartita; Sama sy Jeiela, , zanak'i Hotama, ny Aroerita;
11:45 sy Jediaela, ny zanak'i Simry; sy Joha, rahalahiny, ny Tizite;
11:46 Eliel, ny Mahavita; sy Jeribay sy Josavia, zanak'i Elnama; sy Jitma, sy ny Moabita; Eliel, ary Obed, ary Jasiela avy any Mezobaita.
12:1 koa, ireo nankany amin'i Davida tany Ziklaga, raha mbola nandositra an'i Saoly, ny zanak'i Kisy. Ary izy ireo mahery dia mahery sy ny manan-kaja mpiady,
12:2 hiondrika ny tsipìka, ary ny fampiasana tanana na eo amin'ny vato nanarato teny amin'ny antsamotady, sy ny fitifirana zana-tsipìka. Avy amin'ny rahalahy Saoly, tamin'ny Benjamita:
12:3 ny mpitarika dia Ahiezera, amin'i Joasy, zanak'i Sema avy any Gibea, ary Jeziel sy Jeziela sy Peleta, zanak'i Azmaveta, ary Beraka sy Jeho, avy any Anatota.
12:4 koa, nisy Jismala, avy tany Gibeona, ny mahery indrindra amin'ny amin'ny telo-polo sy mpifehy ny telo-polo; Jeremia, sy Jahaziela, ary Johanana, sy Jozabada, from Gadera;
12:5 sy Elozay, ary Jerimota, ary Bealia, ary Semaria, ary Sefatia, ny Haruphites;
12:6 Elkana, ary Jisia, sy Azarela, sy Joezera, ary Jasobeama, from Carehim;
12:7 ary Joela sy Zebadia koa, zanakalahin'i Jerohama, from Gedor.
12:8 Ary koa, from Gad, dia nita an'i Davida, fony izy mbola niery tany an-efitra, lehilahy matanjaka indrindra, izay tsara mpiady, mihazona ny ampinga lehibe sy lefona; ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'ny-diona, ka dia faingam-pandeha tahaka ny gazela eny an-tendrombohitra serfa.
12:9 Ezera no mpitarika, Obadia no faharoa, Eliaba no fahatelo,
12:10 Mismana no fahefatra, Jeremia no fahadimy,
12:11 Atahy no fahenina, Eliala no fahafito,
12:12 Johanana no fahavalo, Elizabada no fahasivy,
12:13 Jeremia no fahafolo, Machbannai ny fahiraika ambin'ny folo.
12:14 Ireo no avy tamin'ny taranak'i Gada, mpitarika ny tafika. Ny kely indrindra amin'ny miandraikitra ny iray zato miaramila, ary ny lehibe indrindra dia niandraikitra ny iray arivo.
12:15 Ireo no ireo izay niampita an'i Jordana tamin'ny volana voalohany, rehefa zatra ho tondraka ny banky. Dia nampandositra izay rehetra izay nitoetra tao an-dohasaha, ho any amin'ny tany atsinanana sy ny andrefana.
12:16 Dia ny sasany avy any Benjamina sy Joda koa dia tonga tany amin'ny batery fiarovana Davida izay nipetrahany.
12:17 Ary Davida nivoaka hitsena azy, ka hoy Izy:: "Raha toa ianao ka efa tonga am-pilaminana, mba ho fanampiana ahy, Mety ny foko hikambana aminao; Fa raha hamadika ahy amin'ny fahavaloko, na dia tsy misy heloka eto an-tanako, enga anie ny Andriamanitry ny razantsika mahita sy mpitsara. "
12:18 Marina tokoa, ny Fanahy nitafy Amasay, ny mpitarika eo amin'ny telo-polo, ka hoy Izy:: "O David, isika dia Anao! Ary ny zanak'i Jese, isika ho anareo! Peace, Fiadanana ho anareo, sy ny fiadanana ny mpanampy. Fa Andriamanitrao no manampy anao. "Koa, Noraisin'i Davida izy ireo, ary izy nanendry azy ho mpitarika ny tafika.
12:19 Koa, ny sasany avy any Manase niampita an'i Davida, raha nivoaka tamin'ny Filistina an'i Saoly, ka mba hiady. Nefa tsy hiady aminy. Fa ny mpitarika ny Filistina, naka torohevitra, namerina Azy tany, nanao hoe:, "Ho dia mampidi-doza ihany ny loha, dia hiverina ho any amin'ny tompony, Saoly. "
12:20 Ary noho izany, rehefa niverina ho any Ziklaga, ny sasany nandositra nanatona azy avy Manase: nanatona, sy Jozabada, sy Jediaela, ary Michael, ary nanatona, sy Jozabada, sy Eliho, ary Ziletahy, mpitarika arivo amin'ny Manase.
12:21 Ireo nanolotra fanampiana an'i Davida hamely ny jiolahy. Fa ireo lehilahy mahery dia mahery, ka tonga mpitarika tao amin'ny tafika.
12:22 Avy eo, koa, nisy nankany amin'i Davida isan'andro mandritra, mba hanampiana azy, mandra-tonga maro, toy ny miaramilan 'Andriamanitra.
12:23 Ary izao no isan'ny mpitarika ny miaramila izay nankany amin'i Davida raha vao tonga tao Hebrona, ka dia mba hamindra ny fanjakan'i Saoly ho azy, araka ny tenin 'ny Tompo:
12:24 ny taranak'i Joda,, mitondra ampinga lehibe sy lefona, -jato amby enina arivo sy valo, voaomana hiady;
12:25 avy tamin'ny taranak'i Simeona, lehilahy mahery dia mahery noho ny ady, fito arivo sy iray hetsy;
12:26 avy tamin'ny taranak'i Levy,, enin-jato amby efatra arivo;
12:27 ary koa Joiada, ny mpitarika avy amin'ny tahiry Arona, ary ny fehiny dia fiton-jato amby telo arivo;
12:28 ary avy eo dia Zadoka, ny tanora ny toetra miavaka, ary ny ankohonan-drainy, roa amby roa-polo mpitarika;
12:29 ary ny avy tamin'ny taranak'i Benjamina, rahalahin'i Saoly, telo arivo, fa mbola be ireo ampahany dia nanaraka ny tamingan'i Saoly.
12:30 Ary avy amin'ny taranak'i Efraima,, nisy roa alina amby valon-jato, mahery dia mahery sy ny lehilahy matanjaka, malaza eo amin'ny havany.
12:31 Ary avy tamin'ny antsasaky ny firenen'i Manase, valo arivo sy iray, samy araka ny anarany, nivoaka ka mba hanendry an'i Davida ho mpanjaka.
12:32 koa, avy tamin'ny taranak'i Isakara, nisy olona nianatra, izay nahalala tsirairay amin'ny fotoana, mba mialoha izay lokony hataon'ny Isiraely, roan-jato mpitarika. Ary ny sisa amin'ny firenena nanaraka ny torohevitra.
12:33 Avy eo, avy any Zebolona, nisy ireo izay nalefa hanafika, Ary izay tao an-dalana, ny ady, vonona ny fitaovam-piadiana; dimy alina ireo tonga mba hanampy, tsy hampiely lainga-po.
12:34 Ary avy Naftaly, nisy mpitarika arivo; ary manaraka azy dia nisy fito arivo amby telo-polo, vonona amin'ampinga lehibe sy lefona.
12:35 Ary avy eo hatrany Dana, dia nisy valo arivo amby roa-polo amby enin-jato, vonona ho amin'ny ady.
12:36 Ary avy Asera, nisy efatra alina, nivoaka hiady, ary nampanantsoina tany amin'ny ady tsipika.
12:37 Avy eo, ampitan'i Jordana, nisy, avy any amin'ny taranak'i Robena, sy Gada, ary avy tamin'ny antsasaky ny firenen'i Manase, roa alina amby zato, vonona ny fitaovam-piadiana.
12:38 Ireo rehetra ireo mpanafika, vonona ho amin'ny ady, dia niray fo nankany Hebrona, ka mba hanendry an'i Davida ho mpanjakan'ny Isiraely rehetra. Avy eo, koa, ny sisa rehetra amin'ny Isiraely niray fo, ka mba hampanjaka an'i Davida.
12:39 Ary izy ireo amin'izany toerana an'i Davida nandritra ny telo andro, mihinana sy misotro. Fa ny rahalahy efa nanao nanomana azy ireo.
12:40 Koa, ireo izay akaiky azy, na dia hatramin'ny Isakara, sy Zebolona, sy Naftaly, nisy nitondra, ny boriky sy rameva sy ampondra ary omby, mofo ny fandaharana, amin'ny vary, aviavy maina, voaloboka maina, divay, menaka, sy omby sy ondry, amin'ny be. Fa tokoa, nisy fifaliana tamin'ny Isiraely.
13:1 Ary Davida naka saina tamin'ny tribunes, ary ny kapiteny, sy ny mpitarika.
13:2 Ary hoy izy tamin'ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra: "Raha sitraky anao, ary raha ny teny Izay lazaiko tonga avy amin'ny Tompo Andriamanitsika, dia andeha isika haniraka ho any amin'ny sisa amin'ny rahalahintsika, manerana ny faritra dia ny Isiraely, sy ho an'ny mpisorona sy ny Levita, izay monina any amin'ny tany manodidina ny tanàna, mba hanangona ho antsika.
13:3 Ary aoka isika hamerina ny fiaran'ny Andriamanitsika ho antsika. Fa tsy nitady izany nandritra ny andron'i Saoly izany. "
13:4 Ary ny vahoaka rehetra namaly fa tokony hatao. Fa ny teny efa sitraky ny olona rehetra.
13:5 Noho izany, Novorin'i Davida ny Isiraely rehetra, hatrany Sihora any Egypta ka hatrany akaikin'i Hamata, mba hitondra ny fiaran'Andriamanitra avy any Kiriata-jearima.
13:6 Ary Davida niakatra tamin'ny ny lehilahy rehetra amin'ny Isiraely tany an-tendrombohitra Kiriata-jearima, izay any Joda, ka mba hitondra avy tany ny fiaran'i Jehovah Andriamanitra, mipetraka eo amin'ny kerobima, izay ny anarany no hampiharina.
13:7 Ary nametraka ny fiaran'Andriamanitra teo ambonin'ny sariety vaovao avy any an-tranon'i Abinadaba. Dia Oza sy ny rahalahiny no nampandeha ny sariety.
13:8 Ary Davida sy ny Isiraely rehetra dia nilalao ny eo anoloan 'Andriamanitra, rehetra ny fahaizany, in hira, ary ny lokanga, sy valiha, sy ny ampongatapaka, ary ny kipantsona, ary trompetra.
13:9 Ary rehefa tonga teo amin'ny famoloan'i Chidon, Oza naninjitra ny tànany, ka dia mba manohana ny fiara. Fa tokoa, ny omby ho mahatsiravina no nahatonga izany mba atongilano kely.
13:10 Ary toy izany ny Tompo Tezitra tamin'i Oza. Dia namely azy, satria efa nanendry ny fiara. Ka dia maty teo anatrehan'i Jehovah.
13:11 Dia nalahelo indrindra Davida, satria ny TOMPO efa nizara Oza. Ary io tany io hoe 'ny Division an'i Oza,'Na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
13:12 Ary avy eo dia natahotra an'Andriamanitra, tamin'izany fotoana izany, nanao hoe:: "Inona no ho afaka hitondra ny fiaran'Andriamanitra ho atỳ amiko?"
13:13 Ary noho izany antony, tsy mitondra azy ho izy, izany hoe, ho any an-Tanànan'i Davida. Fa tsy, dia nivily ho any an-tranon'i Obed-edoma, Gatita.
13:14 Noho izany, ny fiaran'Andriamanitra nitoetra tao an-tranon'i Obed-edoma ho an'ny telo volana. Ka dia notahin'i Jehovah tao an-tranony mbamin'izay rehetra nananany.
14:1 koa, Hiram, ny mpanjakan'i Tyro, naniraka olona tany amin'i Davida, sy hazo sedera, sy ny mpanao asa tanana ny manda sy ny hazo, ka mba hanao trano ho azy.
14:2 Ary Davida fantany fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'ny Isiraely,, ary ny fanjakany efa nanandratra ny Isiraely olony.
14:3 koa, Davida naka hafa bady koa tany Jerosalema. Dia nanan'anaka zazalahy sy zazavavy izy.
14:4 Ary izao no anaran'ny naterany tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba, Natana sy Solomona,
14:5 Bars, sy Jibara sy Elisoa, sy Elipeleta,
14:6 ary koa ny Noga, sy Noga sy Nafega, sy Jafia,
14:7 Elisama, sy Seliada, ary Elifeleta.
14:8 Avy eo, nandre fa Davida efa nohosorana ho mpanjakan'ny Isiraely rehetra, niakatra ny Filistina rehetra ka mba mitady Azy. Fa i Davida efa nahare izany, dia nivoaka izy mba hitsena azy.
14:9 Ary ny Filistina, tonga, nihahakahaka teny amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
14:10 Ary Davida dia nanontany ny Tompo, nanao hoe:, "Izaho moa hiakatra ho any amin'ny Filistina, ary Hatolotrao eo an-tanako?"Ary hoy Jehovah taminy, "miakatra, ary hatolotro eo an-tananao. "
14:11 Ary nony efa niakatra tany Bala-perazima, Ary Davida namely azy teo, ka hoy Izy:: "Andriamanitra no efa nizara ny fahavaloko amin'ny tanako, toy ny rano dia voazarazara. "Ary noho izany ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bala-perazima.
14:12 Dia nandao ny andriamaniny tao amin'io toerana, ary toy izany koa i Davida nandidy azy ireo mba hodorana.
14:13 Ary avy eo, amin'ny fotoana iray hafa, ny Filistina Nanafika, ka nihahakahaka teny amin'ny lohasaha.
14:14 Ary indray, David Naka hevitra Andriamanitra. Ary hoy Andriamanitra taminy: "Aza hiakatra hanaraka azy. Manaova hiala aminy. Ary ianao koa ho avy hamely azy amin'ny tandrifin'ny hazo balsama.
14:15 Ary, raha mandre feo manatona tao an-tampon 'ny hazo balsama, Avy eo dia nalefa hanafika. Fa Andriamanitra no efa miainga mialoha anao, ka mba hamely ny miaramilan'ny Filistina. "
14:16 Noho izany, David nanao araka izay efa nampianatra azy. Ary namely ny miaramilan'ny Filistina, avy tany Gibeona ka hatrany Gazera.
14:17 Ary ny anaran'i Davida dia lasa fanta-daza any amin'ny faritra rehetra. Ary ny Tompo napetrany ny tahotra ny ho mpanapaka ny firenena rehetra.
15:1 koa, dia nanao trano ho azy tao amin'ny Tanànan'i Davida. Ary nanao fitoerana teo ho an'ny fiaran'Andriamanitra, Ary nanangana lay ho azy.
15:2 Dia hoy Davida:: "Tsy ara-dalàna ny olona mba hitondra ny fiaran'Andriamanitra afa-tsy ny Levita, izay ny Tompo dia nisafidy ny hitondra azy sy hanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tenany, na dia hatrany amin mandrakizay. "
15:3 Ary novoriny ny amin'ny Isiraely any Jerosalema,, ka ny fiaran'Andriamanitra mba ho entina ho any amin'ny fitoerany, izay efa namboariny ho azy.
15:4 tokoa, nisy roa dia ny taranak'i Arona sy ny Levita:
15:5 Avy tamin'ny taranak'i Kehata, Oriela no mpitarika, sy ny rahalahiny dia roa-polo amby zato.
15:6 Avy tamin'ny taranak'i Merary: Asaia no mpitarika, sy ny rahalahiny dia roa-polo amby roan-jato.
15:7 Avy tamin'ny taranak'i Gersona: Joela no mpitarika, sy ny rahalahiny telo-polo amby zato dia.
15:8 Avy tamin'ny taranak'i Elizafana: Semaia no mpitarika, sy ny rahalahiny roan-jato.
15:9 Avy tamin'ny taranak'i Hebrona: Eliel no mpitarika, sy ny rahalahiny no valo-polo.
15:10 Avy tamin'ny taranak'i Oziela: Aminadaba no mpitarika, sy ny rahalahiny dia roa ambin'ny folo amby zato.
15:11 Ary Davida niantso ny mpisorona, Zadoka sy Abiatara, ary ny Levita: Oriela, Asaia, Joel, Semaia, Eliel, ary Aminadaba.
15:12 Ary hoy Izy taminy:: "Ianareo izay ny mpitarika ny Levita fianakaviana, ho masina amin'ny rahalahy, ary hitondra ny fiaran'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ho any amin'ny toerana izay efa namboariko ho azy.
15:13 Raha tsy izany, toy ny teo aloha, nefa ny Tompo namely anay satria tsy manolotra, tahaka izany koa dia mety ho izao, raha manao ny tsy ara-dalàna. "
15:14 Noho izany, ny mpisorona sy ny Levita ireo nohamasinina, ka dia mba hitondra ny fiaran'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely.
15:15 Ary ny taranak'i Levy nitondra ny fiaran'Andriamanitra, araka izay nandidian'i Mosesy, araka ny tenin 'ny Tompo, an-tsorony ny barany.
15:16 Ary hoy Davida tamin'ny mpitarika ny Levita, ka mba hanendry, amin'ny rahalahiny, mpihira miaraka amin'ny zavamaneno, manokana, valiha, sy ny lokanga, ary ny kipantsona, ka dia feo fifaliana mety hanakoako amin'ny avo.
15:17 Ary nanokana avy ny Levita: Hemana, ny zanak'i Joela; ary ny avy tamin'ny rahalahiny, Asafa, ny zanak'i Berekia; ary tena, amin'ny rahalahiny, ny taranak'i Merary: Ethan, ny zanak'i Kosaia.
15:18 Ary amin'izy ireo dia ny rahalahiny ao amin'ny laharana faharoa: Zakaria, sy Ben, ary Jaaziel, sy Semiramota, ary Jahiel, sy Ony, ary Eliaba, ary Benaia, sy Mahaseia, ary Matitia, sy Elifeleho, sy Mikneia, ary Obed-edoma, ary Jeiela, izay mpiandry varavarana.
15:19 Ary ny mpihira, Hemana, Asafa, sy Ethan, dia nitsoka avy nitondra kipantsona varahina.
15:20 ary Zakaria, ary Zakaria sy Aziela, sy Semiramota, ary Jehiela, sy Ony, ary Eliaba, sy Mahaseia, ary Benaia dia nihira zava-miafina ny valiha.
15:21 Ary Matitia, sy Elifeleho, sy Mikneia sy Obed-edoma, sy Jeiela ary Azazia no nasaina dia nihira ny hiran'ny fandresena sy ny lokanga, fa ny Octave.
15:22 Ary Kenania, ny mpitarika ny Levita, no lehibe indrindra noho ny faminaniana, mba hanamarihana avy mialoha ny hira. Fa tokoa, dia nirehitra ny mahay.
15:23 Ary Berekia sy Elkana no mpiandry varavarana amin'ny fiara.
15:24 Ary ny mpisorona, Sebania, sy Josafata, sy Netanela, ary Amasay, ary Zakaria, ary Benaia, ary Eliezera:, dia nitsoka ny trompetra teo alohan'ny fiaran'Andriamanitra,. Ary Obed-edoma sy Jehia koa no mpiandry varavarana amin'ny fiara.
15:25 Noho izany, David, sy ny lehibe rehetra tamin'ny Isiraely teraka, ary ny tribunes, dia hitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah avy tao an-tranon'i Obed-edoma tamin'ny fifaliana.
15:26 Ary rehefa Andriamanitra no nanampy ny Levita, izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, izy ireo sorona vantotr'ombilahy fito sy ondrilahy fito.
15:27 Ary Davida dia niakanjo akanjo rongony fotsy madinika, tahaka ireo koa ny Levita rehetra izay nitondra ny fiara, ary ny mpihira, ary Kenania, ny mpitarika ny faminaniana teo anivon 'ny mpihira. Ary Davida koa nitafy efoda rongony fotsy.
15:28 Ary ny olona rehetra amin'ny Isiraely ka efa nitarika indray ny Vata misy ny fifanekena 'ny Tompo amim-pifaliana, maneno avy amin'ny feon'ny tandroka, ary trompetra, ary ny kipantsona, sy valiha, sy ny lokanga.
15:29 Ary raha ny fiaran'ny faneken'i Jehovah efa tonga tao amin'ny Tanànan'i Davida, Michal, ny zanakavavin'i Saoly, mijery avy teo amin'ny varavarankely, nahita an'i Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka, ka dia nikizaka azy tao am-pony.
16:1 Koa araka izany ny nitondra ny fiaran'Andriamanitra, ka nametraka azy tao afovoan 'ny trano-lay, izay naorin'i Davida ho azy. Ary nanatitra sorona dorana sy fanati-pihavanana teo anatrehan'Andriamanitra izy.
16:2 Ary nony efa vita Davida ny fanatitra dorana sy fanati-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin'ny anaran'ny Tompo.
16:3 Dia nozarainy tamin'izy rehetra tokan-tena iray, avy amin'ny olona na dia ny vehivavy, ny manova ny mofo, ary tapa-natono hen'omby, Lafarinina varimbazaha tsara toto sy ny diloilo nendasina.
16:4 Ary notendreny ny sasany avy ny Levita izay manompo eo anoloan'ny fiaran'i Jehovah, ary fahatsiarovana ny asany, ka hanome voninahitra sy hidera ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,.
16:5 Asafa no mpitarika, ary ny faharoa ho azy dia Zakaria. Ankoatry ny, nisy Jeiela, sy Semiramota, ary Jehiela, ary Matitia, ary Eliaba, ary Benaia, ary Obed-edoma. Ary Jeiela, no mpifehy ny fanaka momba ny valiha sy ny lokanga. Fa Asafa nanenoan'ny amin'ny kipantsona.
16:6 Marina tokoa, ny mpisorona, Benaia sy Jahaziela, dia hitsoka ny anjomara mandrakariva eo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah.
16:7 Amin'izany andro izany, David nataon'i Asafa mpitarika, mba hanaiky ho an'i Jehovah sy ny rahalahiny:
16:8 "Fibabohana any amin'ny Tompo, ary mangataka ny anarany. Ampahafantaro ny ezaka any amin'ny firenena.
16:9 Mihirà ho azy, ary mankalazà azy, ary farito ny fahagagana rehetra.
16:10 Derao ny anarany masina! Aoka ny fon'izay mitady an'i Jehovah hifaly!
16:11 Mitadiava an'i Jehovah sy ny hatsaran-toetra. Mitadiava foana ny tavany.
16:12 Tsarovy ny fahagagana, izay efa vita, ny famantarana, sy ny fitsaran'ny vavany.
16:13 Ry taranak'i Israely, ny mpanompony! Ry taranak'i Jakoba,, ny olom-boafidiny!
16:14 Jehovah, Izy no Andriamanitsika. Ny fitsarany any amin'ny tany rehetra.
16:15 Tsarovy mandrakizay ny fanekeny, ny teny izay nampianarina ho an'ny taranaka arivo mandimby,
16:16 ny fanekena izay voaforona tamin'i Abrahama, ary ny fianianana tamin'i Isaka.
16:17 Ary notendreny koa ho an'i Jakoba ho toy ny didy, ary ny Isiraely ho mandrakizay fifanarahana,
16:18 nanao hoe:: 'Ho anao, Homeko ny tany Kanana, ny lovanareo voazara amin'ny famolaina. '
16:19 Tamin'izany fotoana izany, kely izy ireo isa, izy ireo ary vitsy no voanjo tao.
16:20 Ary nandeha namaky, ny firenena samy hafa, sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa.
16:21 Tsy hamela na iza na iza mba hiampangàna tsy diso azy ireo. Fa tsy, Ary nananatra mpanjaka ho azy:
16:22 'Aza mikasika ny Kristy. Ary aza hanaratsy ny mpaminaniko. '
16:23 Mihirà ho an'ny Tompo, ny tany rehetra! Lazao ny famonjeny, isan'andro isan'andro.
16:24 Farito ny voninahitro any amin'ny jentilisa, ny asa lehibe eo amin'ny firenena rehetra.
16:25 Fa ny Tompo no lehibe sy mendri-piderana indrindra. Ary Izy sady tahotry, ambonin'ny andriamanitra rehetra.
16:26 Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona. Fa ny TOMPO no nanao ny lanitra.
16:27 Fiaiken-keloka sy ny voninahiny no eo anatrehany. Hery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany.
16:28 Ento amin 'ny Tompo, Ry fianakaviana ny firenena, hahatonga ho eo amin'ny Tompo voninahitra sy ny fanjakana.
16:29 Manomeza voninahitra an'i Jehovah, ny anarany. Asandrato ny fanatitra, sy ny fomba fiasa eo anatrehan'ny eo anatrehany. Ary fatratra ny Tompo any fitafiana masina.
16:30 Aoka ny tany rehetra ho taitra eo anatrehany. Fa izy no nanorina izao tontolo izao immoveable.
16:31 Aoka ho faly ny lanitra, ary aoka hifaly ny tany. Ary aoka holazaina any amin'ny firenena, 'Ny Tompo dia nanjaka.'
16:32 Aoka hirohondrohona ny ranomasina, rehetra ny plenitude. Aoka hifaly ny saha, mbamin'izay rehetra ao aminy.
16:33 Ary ny hazo any an-ala, dia hidera eo anatrehan'i Jehovah. Fa avy hitsara ny tany.
16:34 Hidera ny Tompo, fa tsara Izy. Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
16:35 ary manaova hoe:: 'Vonjeo izahay, Andriamanitra ô, Mpamonjy antsika! Ary angòny izahay, ka vonjeo tsy ho azon'ny jentilisa, mba mety manaiky ny anaranao masina, ary aoka hiravoravo amin'ny hira.
16:36 Isaorana anie ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. 'Ary aoka ny olona rehetra hanao hoe, 'Amen,'Ary aoka izy ireo hihira ny hira ho an'i Jehovah. "
16:37 Ary noho izany, teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, dia niala Asafa sy ny rahalahiny, ka dia hanompo eo imason'i ny sambo-fiara tapaka, mandritra ny andro tsirairay, ary ny hifandimby.
16:38 Ary Obed-edoma sy ny rahalahiny valo amby enim-polo. Ary izy nanendry an'i Obed-edoma, ny zanak'i Jedotona, , ary Hosa ho mpiandry varavarana.
16:39 Fa Zadoka mpisorona, ary ny mpisorona rahalahiny, dia teo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah teo amin'ny fitoerana avo, izay tany Gibeona,
16:40 ka afaka nanolotra fanatitra dorana ho an'i Jehovah teo ambonin'ny alitara fandoroana ny dorana mandrakariva, marain-tsy hariva, araka izay rehetra izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Jehovah, izay nampianarina ho an'ny Isiraely.
16:41 Ary ny manarakaraka azy, Hemana, sy Jedotona, ary ny sisa amin'ny olom-boafidy, samy araka ny anarany, notendrena mba hanaiky ho an'i Jehovah: "Fa mandrakizay ny famindram-pony."
16:42 Ary Hemana sy Jedotona nitsoka ny anjomara, ary nilalao teo amin'ny kipantsona, sy ny isan-karazany ny zavamaneno, mba hankalaza an'Andriamanitra. Fa ny zanak'i Jedotona no mpiandry varavarana nataony ho.
16:43 Ary ny vahoaka rehetra dia niverina ho any an-tranony, ary Davida koa, ka mba hitso-drano ny tranony koa.
17:1 Ary Davida nipetraka tao an-tranony, dia hoy izy tamin'i Natana mpaminany: "Indro, Mipetraka amin'ny trano sedera. Nefa ny fiaran'ny faneken'i Jehovah kosa mitoetra ao anaty lay siny hoditra. "
17:2 Ary hoy Natana tamin'i Davida: "Ataovy izay rehetra ao am-ponao. Fa Andriamanitra no momba anao. "
17:3 Kanefa, tamin'iny alina iny ny tenin'Andriamanitra dia tonga tamin'i Natana, nanao hoe::
17:4 "Mandehana, ka lazao amin'i Davida mpanompoko: Izao no lazain'i Jehovah: Ary tsy mahazo manao trano ho ahy ho toy ny fonenany.
17:5 Fa tsy mbola nitoetra an-trano hatry ny fony aho nitondra ny Isiraely nivoaka, mandraka androany. Fa tsy, Efa nanova mandrakariva toerana, amin'ny tabernakely sy ny trano-lay,
17:6 monina tamin'ny Isiraely rehetra. Oviana no mbola niteny aho na iza na iza mihitsy, teo anivon 'ny mpitsara ny Isiraely izay napetraka ao amin'ny anjara-raharahany mba hahazoany niandrasan'ny ny oloko, nanao hoe:: 'Nahoana ianao no tsy nanao trano sedera ho ahy?'
17:7 Ary noho izany, ankehitriny dia izao no afaka lazainao Davida mpanompoko: Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: Izaho no naka anao rehefa nanaraka ny ondry ao an-kijana, ka dia ianao no ho mpanapaka ny Isiraely oloko.
17:8 Ary nomba anao na aiza na aiza ianao efa. Ary Izaho no namono ny fahavalonao rehetra eo anoloanao, ary efa nanao anarana ho anao toy ny anankiray amin'ny lehibe izay ankalazaina eto an-tany.
17:9 Ary nomeko toerana ny Isiraely oloko. Ho ambolena, Ary samy ho velona ao, ary dia tsy mba hangozohozo. Ary aza ny zanaky ny heloka manao azy, tahaka ny any am-piandohana,
17:10 avy ny andro, rehefa nomeko mpitsara ny Isiraely oloko, ary nanetry tena ny fahavalonao rehetra,. Noho izany, No toriko aminareo fa ny Tompo dia hanao trano ho anao.
17:11 Ary rehefa ho efa tapitra ny andronao, mba any amin'ny razanao, Dia hatsangako ny taranaka handimby anao, izay ho avy ny zanakao. Ary hampitoeriko ny fanjakany.
17:12 Dia io no hanao trano ho ahy, ary hataoko mafy orina ny seza fiandrianany, na dia hatrany amin mandrakizay.
17:13 Izaho ho ray aminy, ary izy ho zazalahy ho ahy. Ary tsy hanaisotra ny famindram-poko aminy, tahaka ny nanesorako izany hiala amin'ny olona iray izay talohanareo.
17:14 Ary hitsanganany azy ao an-tranoko sy ao amin'ny fanjakako, eny, mandrakizay. Ary ny seza fiandrianany ho tena hentitra, maty "kosa.
17:15 Araka izany teny rehetra izany, ary araka izao fahitana rehetra, no nolazain'i Natana tamin'i Davida.
17:16 Ary nony efa lasa nandeha Davida mpanjaka, ary efa nipetraka teo anoloan 'ny Tompo, hoy izy:: "Iza aho, Andriamanitra Tompo ô, ary inona no trano, fa ianao no hanome zavatra toy izany tamiko?
17:17 Fa na dia izany dia toa kely eo imasonao, ary noho izany efa niteny ihany koa momba ny taranaky ny mpanomponao na dia ho amin'ny ho avy. Ary efa nanao ahy ho fizàhan'izao mihoatra noho ny olona rehetra, Andriamanitra Tompo ô.
17:18 Ka inona intsony no David manampy, satria manana izany voninahitra ny mpanomponao, ary efa mahalala?
17:19 Tompo O, noho ny mpanomponao, araka ny fonao, no nitondra ny rehetra izany manetriketrika, ary Hianao efa sitrak'Andriamanitra izany zavatra lehibe rehetra ho fantatra.
17:20 Tompo O, tsy misy tahaka Anao. Ary tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy ianao, avy tany rehetra izay efa rentsika momba ny sofinay.
17:21 Fa iza no firenena tokana hafa eto an-tany no tahaka ny Israely olonao, Andriamanitra izay tonga avy, ka mba hanafaka azy, ary mba ho firenena ho azy, ary ny lehibe sy mahatahotra nandroaka ny jentilisa teo anoloan'ny olona izay efa nafahana avy tany Ejipta?
17:22 Ary ianao efa nanendry ny Isiraely olonao ho olonao, na dia hatrany amin mandrakizay. Ary ianao, Tompo O, efa tonga Andriamaniny.
17:23 Koa ankehitriny, Tompo O, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao, ary ny tao an-tranony, ho raisina ho mpikambana amin'ny Azy mandrakizay, ary hanao araka izay efa nolazainao.
17:24 Ary enga anie ny anaranareo sy hankalazana an'i rehetra na dia fotoana. Ary aoka azo lazaina: 'Jehovah, Tompon'ny maro, no Andriamanitry ny Isiraely. Ary ny taranak'i Davida mpanompony maharitra mandrakizay eo anatrehany. '
17:25 Ho anao, Jehovah Andriamanitro ô, efa nilaza tamin'ny ny sofina ny mpanomponao izay hanao trano ho azy. Ary noho izany ny mpanomponao efa nahita finoana ka mba hivavaka eo anatrehanao.
17:26 Koa ankehitriny, Tompo O, Andriamanitra Hianao. Ary ianao efa niteny toy izany amin'ny mpanomponao soa lehibe.
17:27 Ary efa nanomboka ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao, ka dia mety ho eo anatrehanao mandrakariva. Fa satria Hianao izay fitahiana, Tompo O, dia ho voatahy mandrakizay. "
18:1 Ary rehefa afaka izany, nony Davida namely ny Filistina, Dia nampanetry tena azy ireo, dia naka an'i Gata sy ny vavy avy any amin'ny tanan'ny Filistina.
18:2 Ary nandresy ny Moabita. Ary ny Moabita dia tonga ny mpanompon'i Davida, nanolotra fanomezana ho azy.
18:3 Amin'izany andro izany, Davida koa Hadadezera namely, ny mpanjakan'i Zoba, any amin'ny faritra Hamata, raha niala nankeny ka mba hanitatra ny fanjakany hatrany amin'ny ony Eofrata.
18:4 Ary Davida nisambotra arivo ny efatra-kalesy soavaly, ary ny mpitaingin-tsoavaly fito arivo, ary lehilahy roa alina nandeha an-tongotra. Ary notraingoiny avokoa ny soavalin-kalesy, afa-tsy zato kalesy efa-tsoavaly, izay natokana ho an'ny tenany.
18:5 Dia ny Syriana avy any Damaskosy koa tonga, ka mba hanolotra fanampiana ho Hadadezera, ny mpanjakan'i Zoba. Ary noho izany, Davida ary namely azy roa arivo amby roa-polo lahy.
18:6 Ary nametraka miaramila tany Damaskosy, mba Syria koa dia hanompo azy, ary dia hanatitra fanomezana. Ary ny Tompo nanampy azy ny zavatra rehetra izay, dia nandeha Jesosy.
18:7 koa, Davida naka ny volamena tsipìka, izay amin'ny mpanompon'i Hadadezera nanana, Ary nitondra azy nankany Jerosalema.
18:8 Ankoatry ny, Tibata sy Kona avy, tanànan'i Hadadezera, nentiny varahina be dia be, izay Solomona nanao ny ranomasina varahina, ary ny andry, ary ny fanaka varahina.
18:9 Ary nony ren'i Toy,, ny mpanjakan'i Hamata, efa nandre izany, manokana fa Davida efa namely ny miaramilan'i Hadadezera rehetra, ny mpanjakan'i Zoba,
18:10 dia naniraka an'i Hadorama zanany hankany amin'i Davida mpanjaka, ka mba mangataka ny fiadanana avy aminy, ary toy izany koa mba hiarahaba azy fa efa namely, ary nandresy Hadadezera. Fa tokoa, Toi koa dia fahavalon'ny Hadadezera.
18:11 Koa, avokoa ny fanaka volamena sy volafotsy sy varahina Davida mpanjaka masina ho an'ny Tompo, mbamin'ny volafotsy sy ny volamena izay azony tany amin'ny firenena rehetra, betsaka avy any Idomea, sy Moaba, sy ny taranak'i Amona, tahaka ny Filistina ary ny Amalekita.
18:12 Marina tokoa, Abisay, , zanak'i Zeroia,, namely valo arivo sy iray naharesy ny Edomita teo amin'ny Lohasahan-tsira lavaka famorian-drano.
18:13 Ary nametraka miaramila mpiandry tany Edoma, ka dia hanompo an'i Davida Idomea. Ary Davida no namonjen'i Jehovah ny zavatra rehetra izay, dia nandeha Jesosy.
18:14 Noho izany, Davida nanjaka tamin'ny Isiraely rehetra, ary nitsara sy nitondra marina ny vahoakany rehetra tamin'ny.
18:15 Ary Joaba, , zanak'i Zeroia,, , no mpifehy ny miaramila, ary Josafata, ny zanak'i Ahiloda, no mpiandry ny rakitsoratra.
18:16 ary Zadoka, ny zanak'i Ahitoba, sy Ahimeleka, ny zanak'i Abiatara, no mpisorona. Ary Saosa no mpanoratra.
18:17 koa, Benaia, ny zanak'i Joiada, , no mpifehy ny legiona ny miaramila mpiambina andriana. Fa ny zanak'i Davida no voalohany eo amin'ny tanan'ny mpanjaka.
19:1 Ary nony fa Nahasy, ny mpanjakan'ny taranak'i Amona, maty, ary ny zanany no nanjaka nandimby azy.
19:2 Ary hoy Davida: "Izaho dia manao zavatra amin'ny famindram-po amin'ny Hanona, ny zanak'i Nahasy. Fa ny rainy mamindrà fo amiko. "Ary Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny nahafatesan'ny rainy. Ary rehefa tonga tany amin'ny tanin'ny taranak'i Amona, ka mba hampionona Hanona,
19:3 ny mpitarika ny taranak'i Amona tamin'i Hanona hoy: "Moa ve ianao mieritreritra fa angamba Davida naniraka azy hitsapa alahelo anao, mba hanomezam-boninahitra ny rainao? Efa tsy nahatsikaritra fa ny mpanompony tonga ao aminao ka mba hijery, ary hanadihady, sy handinika ny tany?"
19:4 Ary toy izany Hanona nanaratra ny lohany sy ny volombava ny mpanompon'i Davida, ary nanapaka hiala ny akanjo avy amin'ny fitombenako mahazo manao amin'ny tongotra, ka dia nalefany hody izy.
19:5 Ary nony efa lasa, ary efa naniraka tany amin'i Davida, (fa efa nijaly lehibe henatra,) izy naniraka hitsena azy, Ary Nandidy azy Jesosy mba tsy hijanona any Jeriko aloha ambara nitombo ny volombavany, ary avy eo dia tokony hiverina.
19:6 Avy eo, nony avy ireo zanak'Andriamanitra Amona fa efa tonga saina ny ratra nataony tamin'i Davida, na Hanona sy ny sisa ny olona iray nandefa talenta volafotsy arivo, mba hahafahan'izy ireo ho an'ny tenany nanakarama kalesy sy mpitaingin-tsoavaly avy any Mesopotamia, sy ny Syriana Imaka, ary avy any Zoba.
19:7 Dia nanakarama roa amby telo alina an-kalesy, sy ny mpanjakan'i Maka, ny vahoakany. Ary rehefa tonga ireo, dia nanao toby any amin'ny faritra tandrifin'i Medeba. koa, ny taranak'i Amona, manangona niala tany amin'ny tanànany, nankany ady.
19:8 Ary nony efa nandre izany i Davida, dia naniraka an'i Joaba sy ny tafika manontolo lehilahy mahery.
19:9 Ary ny taranak'i Amona, mandeha mivoaka, hanorina hiady tsipika teo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna. Fa ireo mpanjaka tonga ny fanampiana nitsangana teo mitokana tany an-tsaha.
19:10 Ary Joaba, fahatakarana ny ady hatao ho azy sy teo aoriany ny miatrika ny lamosiny, nifidy ny matanjaka indrindra lehilahy rehetra amin'ny Isiraely, Ary nivoaka hiady tamin'ny Syriana.
19:11 Fa ny sisa anjaran'ny olona dia napetrany 'ny tanan' ny rahalahiny Abisay. Dia nivoaka hiady amin'ny taranak'i Amona.
19:12 Ary hoy izy:: "Raha ny Syriana haharesy ahy, dia ho fanampiana ahy. Fa raha ny taranak'i Amona handresy anareo, Izaho no ho fiarovana ho anareo.
19:13 Aoka ianao ho hery, ary aoka isika hanao zavatra amim-pahasahiana ho an'ny olontsika, ary amin'ny anaran'ny amin'ny tanànan'ny Andriamanitsika. Ary Jehovah hanao izay tsara eo imasony ny. "
19:14 Noho izany, Joaba, ary ny olona izay nomba azy, tany an-tafika hiady tamin'ny Syriana. Ary nataony nandositra.
19:15 Ary ny taranak'i Amona, nahita fa efa nandositra ny Syriana, koa ny tenany nandositra Abisay, rahalahiny, ka dia niditra tao an-tanàna. Ary ankehitriny dia niverina tany Jerosalema Joaba.
19:16 Fa ny Syriana, satria efa lavo teo anoloan'ny Isiraely, naniraka olona, ary dia nentiny ny Syriana izay tany an-dafin'ny ony. ary Sobaka, ny mpitarika ny miaramila azony tamin'i Hadadezera, dia ny mpifehy.
19:17 Rehefa izany dia efa nilaza tamin'i Davida, dia namory ny Isiraely rehetra, ary dia nita an'i Jordana. Dia nihazakazaka nankany azy. Ary nanangana ady manatrika azy ireo tsipika. Izy, dia niady taminy.
19:18 Fa vaky nandositra ny Syriana avy any Israely. Ary Davida nahafaty ny Syriana kalesy fito arivo, sy efa-polo alina an-tongotra, ary Sobaka, ny mpitarika ny tafika.
19:19 Dia hoy ny mpanompon'i Hadadezera, mahita ny tenany ho resin'ny Israely, tafita an'i Davida, ka dia nanompo azy. Ary intsony i Syria vonona ny hanolotra fanampiana ho an'ny taranak'i Amona.
20:1 Ary nitranga fa, araka ny Mazava ho azy fa izay iray taona, amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka matetika nalefa hanafika, Joaba nanangona ny antokon'ny miaramila mitondra miaramila za-draharaha, Ary nandrava ny tanin'ny taranak'i Amona. Ary izy nitoetra teo sady nanao fahirano an'i. Fa Davida nitoetra tany Jerosalema, rehefa Joaba namely an'i Raba ka noravany.
20:2 Ary nalain'i Davida ny satro-Milkoma hatramin'ny lohany, ary hita teo ny lanjan'ny talenta volamena iray, ary vatosoa tena sarobidy. Ary nanao ny tenany ho fehiloha firavaka ho avy izany. koa, dia nalainy ny tsara indrindra babo tao an-tanàna, izay dia maro indrindra.
20:3 Avy eo dia nitondra ny olona izay tao anatiny. Ary nitondra angadinomby, ary sleds, sy ny kalesy vy mba hankany aminy, loatra ka izy ireo tapaka sy torotoro masina. Ary i Davida hitondra ny tanàna rehetra tamin'ny taranak'i Amona. Dia niverina tamin'ny vahoakany rehetra nankany Jerosalema.
20:4 Rehefa afaka izany,, dia nanomboka nisy ady tany Gazera tamin'ny Filistina, izay namely sy Sibekay Hosatita Sippai avy amin'ny hazakazaka ny Refaita, Dia nampanetry tena azy ireo.
20:5 koa, ady iray hafa no noraisiny tamin'ny Filistina, izay Elanana, ny zanaky ny ala, ny Betlehemita, namely ny rahalahin'i Goliata Gatita, ny hazo lefony dia tahaka ny vodi-tenon'ny mpanenona.
20:6 Ary koa, ady iray hafa nitranga tao Gata, izay be dia lehilahy avo be, manana isa enina, izany hoe, rehetra miaraka efatra amby roa-polo. Ity lehilahy ity koa dia teraka avy amin'ny taranaky ny Refaita.
20:7 Nampangaina ho niteny ratsy ny Isiraely. ary Jonatana, , zanak'i Simea, ny rahalahin'i Davida, namono azy. Ireo no taranaky ny Refaita tao Gata, izay matin'ny tànan'i Davida sy ny mpanompony.
21:1 Ary Satana nitsangana tamin'ny Isiraely, ary nampirisika an'i Davida ka mba hanisa ny Isiraely.
21:2 Ary hoy Davida tamin'i Joaba sy tamin'ireo mpitarika ny vahoaka: "Mandehana, isao ny Isiraely sy ny, hatrany Beri-sheba ka hatrany Dana. Ary hitondra ahy ny isa, ka mba ho fantatro izany. "
21:3 Ary Joaba namaly: "Enga anie ny Tompo hampitombo ny olony ho injato mihoatra noho izy ireo. Fa, ny mpanjaka tompoko, moa tsy ny mpanomponao rehetra? Nahoana no mitady ny tompoko izany zavatra izany, izay azo isaina noho ny ota ho an'ny Isiraely?"
21:4 Fa ny tenin'ny mpanjaka fa tsy nahery. Ary Joaba lasa nandeha, ary dia nandeha manodidina, ny alalan 'ny Isiraely rehetra. Dia niverina nankany Jerosalema.
21:5 Ary dia nomeny an'i Davida ny isan'ny olona izay efa nanaovana fanadihadiana. Ary ny isan'ny Isiraely manontolo dia hita fa iray tapitrisa sy iray hetsy, izay afaka nanatsoaka ny sabatra; fa avy any Joda, nisy amby efa-jato sy fito alina ny miaramila.
21:6 Fa ny Levy sy ny Benjamina tsy nataony isa. Fa Joaba novonoina ho faty ny baiko ny mpanjaka tsitrapo.
21:7 Ary tsy sitrak'Andriamanitra amin'ny zavatra efa nanome baiko, ka dia namely ny Isiraely.
21:8 Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: "Efa nanota indrindra aho raha manao izany. Mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao. Fa efa nanao hadalana. "
21:9 Ary Jehovah niteny tamin'i Gada, ny mpahita Davida, nanao hoe::
21:10 "Mandehana, ka lazao amin'i Davida, ka lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah: Omeko anao ny safidy ny zavatra telo. Mifidiana ny olona fa ho tianao, fa Izaho no hanao izany aminareo. "
21:11 Ary nony efa lasa nandeha Gada tamin'i Davida, hoy izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah: Fidio izay ho tianao:
21:12 Na telo taona ny mosary, na telo volana ho anareo handositra ny fahavalonareo, tsy afaka ho afa-mandositra ny sabatra, na telo andro Fa manan-tsabatra ny Tompo sy ny areti-mandringana, mba hiala ao anatin'ny tany, ny Anjelin'i Jehovah famonoana amin'ny lafiny rehetra amin'ny maha Isiraely. Koa ankehitriny, jereo izay tokony hamaly Izay naniraka Ahy. "
21:13 Ary hoy Davida tamin'i Gada: "Misy olana mifanety ahy avy amin'ny manodidina rehetra. Saingy fa tsara ho ahy ny latsaka any an-tanan 'ny Tompo, ny famindram-po maro, noho ny eo an-tànan'ny olona. "
21:14 Noho izany, Jehovah areti-mandringana ny Isiraely,. Dia nahazo eo amin'ny Isiraely ny fito alina izy.
21:15 koa, dia naniraka Anjely hankany Jerosalema, ka mba hamely azy. Ary raha mbola namely, ny Tompo nahita ka naka niantra noho ny halehiben'ny ny ratsy. Ary Izy nandidy ny anjely izay namely: "Fa ampy. Aoka ny tananao intsony. "Ary Ilay Anjelin'i Jehovah nitsangana teo anilan'ny famoloan'i Araona Jebosita.
21:16 ary David, nanopy ny masony, nahita Ilay Anjelin'i Jehovah, nitsangana teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany tamin'ny nitana sabatra voatsoaka teny an-tànany, Nitodika nankany Jerosalema. Ary dia izy sy ireo lehibe no firazanany, rehefa mitafy lamba fisaonana, dia voafafy teny amin'ny tany mora.
21:17 Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: "Moa ve aho tsy ilay nanome baiko fa ny olona azo isaina? Izaho no nanota; fa Izaho no nanao izay ratsy. io ondry, inona no mendrika? Jehovah Andriamanitro ô, Mifona aminao aho mba hamela ny tananao ho mivadika ho fahavaloko sy ny ankohonan'ny raiko. Nefa aoka tsy ny olona ho resy eo. "
21:18 Ary Ilay Anjelin'i Ny Tompo dia nampianatra Gada mba hilaza amin'i Davida mba hiakatra ka hanangana alitara ho an'i Jehovah Andriamanitra teo amin'ny famoloan'i Araona Jebosita.
21:19 Noho izany, David niakatra, araka ny tenin'i Gada, dia izay efa nolazainy taminy amin 'ny anaran' ny Tompo.
21:20 Ary rehefa efa nijery Araona ka nahita ilay Anjely, izy sy ny zanany efa-dahy niery. Fa tamin'izany andro izany, dia nively vary eo am-pamoloana.
21:21 Avy eo, tahaka Araona Davida, dia nanatona, Araona nahita azy, ka dia lasa niala teo am-pamoloana mba hitsena azy. Ary izy ka hajaina azy mora eny an-kianja.
21:22 Ary hoy Davida taminy:: "Omeo ity toerana ity ny eo am-pamoloanao ho ahy, ka mba hanorenako alitara ho an'i Jehovah eo. Ary dia hanaiky ahy ho toy ny vola be tahaka ny mendrika, ka dia nitsahatra ny areti-mandringana dia mety avy ny olona. "
21:23 Fa hoy Araona tamin'i Davida: "Raiso ito, ary aoka ny mpanjaka tompoko hanao izay mampifaly azy. Koa, Omeko koa ny omby ho fanatitra dorana, ary ny miasa ho kitay, ary ny vary tritika ho fanatitra. Dia hanatitra malalaka rehetra. "
21:24 Ary Davida mpanjaka nanao taminy hoe:: "Tsy izany mihitsy hisy akory. Fa tsy, Homeko vola ho anao, araka izay tsy hanenenana. Fa tsy tokony handray izany avy aminao, ary amin'izany izy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah izay nampisy fiantraikany na inona na inona. "
21:25 Noho izany, Nomen'i Davida Araona, fa ny toerana, fotsiny ny tena lanjan'ny sekely enin-jato volamena.
21:26 Ary nanorina alitara ho an'i Jehovah teo. Ary nanatitra sorona dorana sy fanati-pihavanana, ary niantso ny Tompo. Ary nihaino azy an-nandefa afo avy tany an-danitra eo ambonin'ny alitara ny Famonoana Tambabe.
21:27 Ary ny Tompo dia nampianatra ny anjely, ary dia nitodika ny sabany indray ny tranony.
21:28 Avy eo, nahita fa ny Tompo efa nanaraka azy teo amin'ny famoloan'i Araona Jebosita, David avy hatrany sorona niharam-boina tao.
21:29 Fa ny tabernakelin'i Jehovah, izay nataon'i Mosesy tany an-efitra, sy ny alitara fandoroana dorana, dia tamin'izany andro izany teo amin'ny fitoerana avo tao Gibeona.
21:30 Ary Davida dia tsy afaka ny handeha ho any amin'ny alitara, ka mba mivavaka amin'Andriamanitra any. Fa efa namely miaraka amin'ny tahotra lehibe izaitsizy tokoa, nahita ny sabatry ny Anjelin'i Jehovah.
22:1 Ary hoy Davida, "Eto no ho tranon'i 'Andriamanitra, ary eto no ho alitara fandoroana ny fanatitra dorana ho an'ny Isiraely. "
22:2 Ary nandidy azy ireo hanangona olona vao niova fo ny rehetra avy tany amin'ny tany Isiraely. Ary avy amin'ireo nanendreny stoneworkers, mba nihady vato sy ny mandamina azy ireo, ka mba hanao ny trano 'Andriamanitra.
22:3 koa, Davida nahavonona vy be dia be ny fampiasana ny fantsika ny vavahady, ary ny seams sy ny tonon-taolana, ary koa ny lanjan'ny varahina hay refesina.
22:4 koa, ny hazo sedera, izay ny mponina tany Sidona sy Tyro efa nentina tamin'i Davida, tsy afaka ny ho isaina.
22:5 Ary hoy Davida: "Anaka Solomona dia zaza sady tanora fanahy zazalahy. Fa ny trano izay enga anie ka ho naoriny ho an'i Jehovah tokony ho lehibe toy izany fa malaza amin'ny faritra rehetra. Noho izany, I hanomana inona no ho ilaina ho azy. "Ary noho izany antony, talohan'ny nahafatesany, dia nanomana ny fandaniana.
22:6 Ary niantso an'i Solomona, zanany. Ary izy nandidy azy hanao trano ho an'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,.
22:7 Ary hoy Davida tamin'i Solomona: "Ny zanako lahy, fa ny sitrapoko fa hanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro.
22:8 Kanjo kosa ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe:: 'Efa nalatsakao be ra, ary efa niady tamin'ny ady maro. Ianao tsy afaka ny hanorina trano ho an'ny anarako, dia lehibe tokoa ny fandatsahan-dra eo anatrehako.
22:9 Ny zanaka izay ho teraka ho anareo ho tena lehilahy mangina. Fa hampanakaiky azy Aho mba sasatra avy ny fahavalony rehetra manodidina. Ary noho izany antony, dia hatao hoe am-pilaminana. Ary hataoko mahita fiadanana sy ny filaminana ho an'ny Isiraely nandritra ny androny rehetra.
22:10 Dia io no hanao trano ho an'ny anarako. Ary izy ho zazalahy ho ahy, ary Izaho ho ny ray ho azy. Ary Izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany amin'ny Isiraely ho mandrakizay. '
22:11 Koa ankehitriny, ny zanako lahy, ny Tompo anie homba anao, ary hambinina anie ianao ka hanao trano ho an'i Jehovah Andriamanitrao, araka izay efa nolazainy momba anao.
22:12 koa, ny Tompo anie hanome anareo fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, mba ho afaka hanapaka ny Isiraely sy hiambina ny lalàn'i Jehovah Andriamanitrao.
22:13 Fa amin'izany dia ho afaka ny handroso, raha mitandrina ny didy sy ny fitsipika fa ny Tompo dia nandidy an'i Mosesy mba hampianatra ho an'ny Isiraely. Be hery ary hanao zavatra amim-boninahitra. Tsy tokony hatahotra, ary tsy tokony hatahotra.
22:14 Indro, amin'ny fahantrana izaho efa namboatra ny fandaniana ho an'ny tranon'i Jehovah: iray hetsy talenta volamena, ary iray tapitrisa ny talenta volafotsy. Na izany aza tena, misy tsy nandrefesany ny varahina sy ny vy. Fa ny maridrefy dia mihoatra hita isa. Ary izaho efa namboatra ny hazo sy ny vato ho an'ny tetikasa manontolo.
22:15 koa, manana dia maro indrindra mpanao asa tanana: stoneworkers, sy ny mpanorina ny rindrina, sy ny mpanao asa tanana hazo, ary izay manan-tsaina, indrindra amin'ny fanaovana ny asa rehetra kanto,
22:16 volamena sy volafotsy, sy ny varahina sy ny vy, izay tsy hita isa. Noho izany, mitsangana ka ataovy ilay asa. Ary Jehovah no momba anareo. "
22:17 koa, Davida nandidy ny lehibe rehetra tamin'ny Isiraely, ka dia izy ireo hanampy an'i Solomona zanany,
22:18 nanao hoe:: "Hitanao fa Jehovah Andriamanitrao no momba anao, ary efa nomeny anareo amin'ny lafiny rehetra, ary Izy efa nanolotra ny fahavalonao rehetra eo an-tananao, ary ny tany efa resy teo anoloan'i no Jehovah sy teo anoloan'ny olony.
22:19 Noho izany, manolotra ny fonareo sy ny fanahinareo, mba hitady an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary mitsangàna, ka hanorina fitoerana masina ho an'i Jehovah Andriamanitra, ka ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ary ny fanaka masina ho an'ny Tompo, Mety ho entina ao an-trano izay efa vita ho an'ny anaran'i Jehovah. "
23:1 Ary Davida, rehefa tratrantitra ka ela niainana, voatendry Solomona zanany ho mpanjakan'ny Israely.
23:2 Ary novoriny ny mpitarika ny Isiraely, ny mpisorona ary koa ny Levita.
23:3 Ary nisaina ny Levita hatramin'ny telo-polo taona no ho miakatra taona. Ary hita valo arivo amby telo-polo lahy.
23:4 ireo, efatra arivo amby roa-voafidy sy nozaraina ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah. Avy eo ny enina arivo mpiandraikitra sy mpitsara.
23:5 Koa, ny efatra arivo ho mpiandry varavarana. Ary toy izany koa isan'ny mpihira ny salamo ho an'ny Tompo, miaraka ny zava-manenon'i izay efa natao ho mozika.
23:6 Ary Davida nizara ho antokony ireo araka ny zanakalahin'i Levy,, manokana, Gersoma, sy Kehata, ary Merary.
23:7 Ary ny zanakalahin'i Gersona: Ladana sy Simey.
23:8 Ary ny zanakalahin'i Ladana: ny mpitarika Jahiel, sy Zetama, sy Joela, telo.
23:9 Ary ny zanakalahin'i Simey: Selomota, sy Haziela, ary Harana, telo. Ireo no mpitarika ny fianakaviana Ladana.
23:10 Ary ny zanakalahin'i Simey: Jahata, ary Azizah, sy Jeosy, ary Beria. Ireo no zanakalahin'i Simey, efatra.
23:11 Ary Jahata no voalohany, Azizah faharoa, fa Jeosy sy Beria tsy nanana zanakalahy maro, ary noho izany antony izany dia nisaina ho fianakaviana iray sy trano iray.
23:12 Ary ny zanakalahin'i Kehata: Amrama sy Jizara, Hebrona ary Oziela, efatra.
23:13 Ny zanakalahin'i Amrama dia: Arona sy Mosesy. Ary Arona natokana ka izy hanompo tao amin'ny Masina Indrindra, izy sy ny taranany mandrakizay, ary toy izany koa mba handoro ditin-kazo manitra ho an'ny Tompo, araka ny fombam-pivavahana, ary toy izany koa mba hitso-drano ny anarany eo amin'ny Azy mandrakizay.
23:14 Ny zanakalahin'i Mosesy, ilay lehilahin'Andriamanitra, koa nandamina ny firenen'i Levy.
23:15 Ny zanakalahin'i Mosesy: Dia Gersona sy Eliezera.
23:16 Ary ny zanakalahin'i Gersona: Dia Seboela no voalohany.
23:17 Ary ny zanakalahin'i Eliezera dia Rehabia ny ny voalohany. Ary tsy nisy hafa taranakareo Eliezera. Fa ny zanak'i Rehabia dia maro indrindra.
23:18 Ary ny zanakalahin'i Jizara: Dia Selomota no voalohany.
23:19 Ary ny zanakalahin'i Hebrona: Dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra.
23:20 Ary ny zanakalahin'i Oziela: Mika ny voalohany, Jisia no faralahy.
23:21 Ary ny zanakalahin'i Merary: Dia Maly sy Mosy. Ary ny zanakalahin'i Maly: Eleazara sy Kisy.
23:22 Ary maty Eleazara, ary tsy nanan-janakalahy, fa ny vavy. Ary toy izany ny zanakalahin'i Kisy, ny rahalahiny, nanambady azy.
23:23 Ary ny zanakalahin'i Mosy: Maly, sy Edera, sy Jeremota, telo.
23:24 Ary izao no zanakalahin'i Levy, ny havany sy ny fianakaviany, mpitarika in mifandimby, ary izao no isan'ny lohan'ny tsirairay izay nanao ny asa ny asa fanompoana tao an-tranon'i Jehovah, hatramin'ny roa-polo taona no ho miakatra.
23:25 Fa hoy Davida:: "Ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, efa nanome fitsaharana ho an'ny olony, ary ny fonenany tany Jerosalema toy ny efa ho mandrakizay.
23:26 Ary tsy tahaka izany no hatao ny anjara fanompoan 'ny Levita intsony hitondra ny tabernakely na ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fanompoana. "
23:27 koa, araka ny didy farany Davida, ny taranak'i Levy, dia ho isaina amin'ny isa hatramin'ny roa-polo taona no ho miakatra.
23:28 Ary izy ho ambanin'ny tànan'ny taranak'i Arona, eo amin'ny fikarakarana ao an-tranon'i Jehovah, ao amin'ny vestibule, ary ao an-efi-trano, ary amin'ny toerana fanadiovana, sy ao amin'ny fitoerana masina, ary tamin'ny tany rehetra ny asan'ny fanompoana amin'ny tempolin'ny Tompo.
23:29 Fa ny mpisorona dia ho eo amin'ny mofo aseho, sy ny fanatitra varimbazaha tsara toto, ary ny mofo tsy misy masirasira, ary ny lapoaly, ary ny roasting, ary ny biby rehetra mitambesatra sy ny fepetra.
23:30 Na izany aza tena, ny Levita no ho eo mba hiaiky sy hihira ho an'i Jehovah, amin'ny maraina, ary toy izany koa amin'ny hariva,
23:31 betsaka eo amin'ny fanatitra ny dorana 'ny Tompo, toy ny tamin'ny Sabata sy ny voaloham-bolana sy ny fotoam-pivavahana hafa, araka ny isany sy fombafomba ho an'ny tsirairay sy ny zavatra rehetra, mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah.
23:32 Ary aoka izy ireo hitandrina ny fitandremana ao amin'ny trano-lay fanekena, ary ny fombafomba ao amin'ny fitoerana masina, ary ny fitandremana ny taranak'i Arona, ny rahalahiny, mba fanompoam-pivavahana ao an-tranon'i Jehovah.
24:1 Ary izao no nizarana azy ho antokony avy amin'ny taranak'i Arona. Ary ny zanakalahin'i Arona: Nadaba, sy Abiho, ary Eleazara, ary Itamara.
24:2 Fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy, ary raha tsy ny ankizy. Ary dia Eleazara sy Itamara mpisorona nampiasa ny birao.
24:3 Ary Davida nizara azy ireo, izany hoe, Zadoka, isan'ny taranak'i Eleazara, sy Ahimeleka, isan'ny taranak'Itamara, araka ny antokony sy ny fanompoany.
24:4 Ary nisy nahita ny olona maro kokoa ny avy tamin'ny taranak'i Eleazara teo ny loholona, kokoa noho ny tamin'ny taranak'Itamara. Noho izany, dia nizara azy ka tsy nisy, ny avy tamin'ny taranak'i Eleazara, mpitarika enina ambin'ny folo, araka ny fianakaviany, ary ny avy tamin'ny taranak'i Itamara valo araka ny fianakaviany sy ny tranony.
24:5 Dia nozarainy teo aminy, ao amin'ny fianakaviana roa, tamin'ny filokana. Fa nisy ireo mpitarika ny fitoerana masina sy ireo mpitarika 'Andriamanitra, tahaka ny betsaka avy amin'ny taranak'i Eleazara toy ny avy amin'ny taranak'i Itamara.
24:6 Ary ny mpanora-dalàna Semaia, ny zanak'i Netanela, ny Levita, nanoratra izany teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka, sy Zadoka, ny mpisorona, sy Ahimeleka, ny zanak'i Abiatara, ary koa ny mpitarika ny mpisorona sy ny Levita fianakaviana. Ary nisy trano iray, izay faran'izay lehibe tsy noho ny olon-kafa, ny an'i Eleazara; ary nisy trano hafa, izay nanana ny hafa ambaniny, ny an'i Itamara.
24:7 Ny loka voalohany dia nivoaka Joiariba, ny faharoa an'i Jedaia,
24:8 ny fahatelo an'i Harima, ny fahefatra an'i Seorim,
24:9 ny fahadimy an'i Malkia, ny fahenina an'i Miamina,
24:10 ny fahafito an'i Hakoza, ny fahavalo an'i Abia,
24:11 ny fahasivy an'i Jesoa, ny fahafolo an'i Sekania,
24:12 ny fahiraika ambin'ny folo an'i Eliasiba, ny faharoa ambin'ny folo an'i Jakima,
24:13 ny fahatelo ambin'ny folo an'i Hopa, ny fahefatra ambin'ny folo an'i Jeshebeab,
24:14 ny fahadimy ambin'ny folo an'i Bilga, ny fahenina ambin'ny folo an'Imera,
24:15 ny fahafito ambin'ny folo an'i Hezira, ny fahavalo ambin'ny folo an'i Happizzez,
24:16 ny fahasivy ambin'ny folo an'i Petahia, ny faharoa-polo an'i Jehezkel,
24:17 ny amby roa-polo an'i Jakina voalohany, ny faharoa amby roa-polo an'i Gamola,
24:18 ny fahatelo amby roa-polo an'i Delaia, ny fahefatra amby roa-polo an'i Mazia.
24:19 Ireo ny antokony avy araka ny asa fanompoana, ka dia izy ireo hiditra tao an-tranon'i Jehovah, araka ny fomba fanao, ny tanan 'i Arona, ny rainy, araka ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, efa nampianatra.
24:20 Ary ny taranak'i Levy izay sisa tavela, nisy Sobaela, avy tamin'ny taranak'i Amrama, ary Jedda, avy tamin'ny taranak'i Sobaela.
24:21 koa, nisy Jisia, ny mpitarika avy tamin'ny taranak'i Rehabia,
24:22 ary tena Selomota, ny zanak'i Jizara, ary Jahata, ny zanak'i Selomota,
24:23 sy ny Zanany, Dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra.
24:24 Ary ny zanakalahin'i Oziela dia Mika ny. Ary ny zanakalahin'i Mika dia Samira.
24:25 Ny rahalahin'i Mika dia Jisia. Ary ny zanakalahin'i Jisia dia Zakaria.
24:26 Ny zanakalahin'i Merary dia Maly sy Mosy. Ny zanak'i Ozia dia Beno.
24:27 koa, ny zanak'i Merary: Ozia, sy Sohama, ary Zakora, ary Hebri.
24:28 Ankoatry ny, ny zanak'i Maly dia Eleazara, izay tsy nanan-janaka.
24:29 Marina tokoa, ny zanak'i Kisy dia Jeramela.
24:30 Ary ny zanakalahin'i Mosy dia Maly, Eder, ary Jerimota. Ireo no zanakalahin'i Levy, araka ny tranon'ny ny fianakaviany.
24:31 Ary nanao filokana izy ireo koa ny momba ny rahalahiny, dia ny taranak'i Arona, teo anatrehan'i Davida mpanjaka, ary Zadoka, sy Ahimeleka, ary ny lohan'ny mpisorona sy ny Levita ny fianakaviana, araka betsaka momba ny anti-panahy toy ny zandry. Ny filokana nizara ny zavatra rehetra tsy mitanila.
25:1 Ary Davida sy ireo governora miaramila natokan'i, amin'ny fanompoana, tamin'ny zanak'i Asafa, ary Hemana, ary Jedotona, izay mba haminany amin'ny lokanga sy ny valiha ary ny kipantsona, araka ny isany, rehefa nanolo-tena ho amin'ny birao voatendry.
25:2 Avy tamin'ny taranak'i Asafa: Zakora, ary Joseph, dia Semaia sy Netania, ary Asarela, tamin'ny zanak'i Asafa, ny tanan 'i Asafa, naminany teo anatrehan'ny mpanjaka.
25:3 Ary Jedotona, ny zanak'i Jedotona: Gedalia, Zery, Jesaia, ary Hasabia, ary Matitia, enina, ny tanan 'ny rainy Jedotona, izay naminany tamin'ny lokanga, raha miaiky heloka sy midera ny Tompo.
25:4 koa, Hemana, ny zanak'i Hemana,: Bokia, Matania, Oziela, Seboela, ary Jerimota, Hanania, Hanany, Eliata, Giddlti, sy Romamti-ezera, sy Josbekasa, Maloty, Hotira, Mahaziota;.
25:5 Ireo rehetra ireo no zanak'i Hemana,, mpahita 'ny mpanjaka ny tenin' Andriamanitra, mba hanandratra ny tandroka. Ary Andriamanitra nanome an'i Hemana efatra ambin'ny folo sy zazavavy telo.
25:6 ireo rehetra ireo, eo ambany tanan'ny-drainy, nozaraina mba hihira ny amin'ny tranon'i Jehovah, miaraka amin'ny kipantsona sy ny valiha sy ny lokanga, amin'ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah teo anatrehan'ny mpanjaka, manokana, Asafa, sy Jedotona, sy Hemana.
25:7 Ary ny isan 'ireo, sy ny rahalahiny, izay nampianatra tao amin'ny hira 'ny Tompo, ny mpampianatra, dia valo-polo amby roan-jato valo.
25:8 Ary nanao filokana ny hifandimby, ny anti-panahy koa ny tanora, ny nianatra miaraka amin'ny mpahay lalàna na nampianarina.
25:9 Ary ny loka voalohany dia nivoaka tamin'i Josefa, izay Asafa; ny faharoa an'i Gedalia nivoaka, ho azy sy ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:10 Ny fahatelo dia an'i Zakora, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:11 Ny fahefatra dia an'i Jizry, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:12 Ny fahadimy dia an'i Netania, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:13 Ny fahenina dia an'i Bokia, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:14 Ary ny fahafito dia an'i Jesarela, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:15 Ny fahavalo dia an'i Jesaia, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:16 Ny fahasivy dia an'i Matania, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:17 Ny fahafolo an'i Simey lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:18 Ny fahiraika ambin'ny folo an'i Azarela lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:19 Ny faharoa ambin'ny folo an'i Hasabia lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:20 Ny fahatelo ambin'ny folo an'i Sobaela lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:21 Ny fahefatra ambin'ny folo an'i Matitia lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:22 Ny fahadimy ambin'ny folo dia an'i Jeremota, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:23 Ny fahenina ambin'ny folo dia an'i Hanania, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:24 Ny fahafito ambin'ny folo an'i Josbekasa lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:25 Ny fahavalo ambin'ny folo dia an'i Hanany, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:26 Ny fahasivy ambin'ny folo an'i Maloty lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:27 Ny faharoa-polo an'i Eliata lasa, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:28 Ny amby roa-polo an'i Hotira nandeha voalohany, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:29 Ary ny faharoa amby roa-polo an'i Gidalty nandeha, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:30 Ny fahatelo amby roa-polo an'i Mahaziota nandeha, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
25:31 Ny fahefatra amby roa-polo an'i Romamti-ezera nandeha, ny zanany sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo.
26:1 Ary ny antokon'ny mpiandry varavarana dia, avy amin'ny Koraita: Meselemia, ny zanak'i Kore, ny avy tamin'ny taranak'i Asafa.
26:2 Ary ny zanakalahin'i Meselemia: Zakaria, lahimatoa, Sy Jediaela, lahiaivo, Sy Zebadia, fahatelo, Sy Jediaela, fahefatra,
26:3 Sy Elama, fahadimy, Sy Johanana, fahenina, Elihoenay, faralahy.
26:4 Ary ny zanakalahin'i Obed-edoma: Semaia, lahimatoa, Sy Jozabada, lahiaivo, Sy Joa, fahatelo, Sachar fahefatra, Netanela, fahadimy,
26:5 Sy Amiela, fahenina, Sy Isakara, fahafito, Peoletahy, faralahy. Fa Jehovah efa nitso-drano azy.
26:6 Ary ho zanany Semaia, no nahaterahan'ny zanany, mpifehy ny fianakaviany. Fa izy ireo ny lehilahy mahery dia mahery.
26:7 Ary ny zanakalahin'i Semaia dia Otny dia, sy Refaela, ary Obed, Elizabada sy ny rahalahiny, lehilahy mahery dia mahery, ary koa ny Eliho sy Semachiah.
26:8 Ireo rehetra ireo no avy tamin'ny zanak'i Obed-edoma: dia izy sy ny zanany sy ny rahalahiny, tena miendrika ho ao amin'ny fanompoana, roa amby enim-polo avy any Obed-edoma.
26:9 Avy eo nisy ny zanakalahin'i Meselemia sy ny rahalahiny, lehilahy matanjaka indrindra, valo ambin'ny folo.
26:10 Ankehitriny, avy any Hosa, izany hoe, avy tamin'ny taranak'i Merary: Simry ny mpitarika, fa efa tsy nanan-lahimatoa, ary noho izany, noho io, ny rainy nanao fotoana taminy ireo toy ny mpitarika,
26:11 Sy Hilkia, lahiaivo, Sy Tebalia, fahatelo, Zakaria, fahefatra. ireo rehetra ireo, ny zanakalahin'i Hosa sy ny rahalahiny, dia telo ambin'ny folo.
26:12 Ireo nozaraina ho mpiandry varavarana, dia avy ny mpitarika ny lahatsoratra, ary koa ny rahalahiny, dia fanompoam-pivavahana tsy tapaka tao an-tranon'i Jehovah.
26:13 Dia nanao filokana izy ireo koa, fa na ny kely na ny lehibe, araka ny fianakaviany, ny tsirairay avy ny vavahady.
26:14 Koa ny loka tamin'ny atsinanana dia azon'i Selemia latsaka avy. Fa ny zanany Zakaria, tena manan-tsaina, ary nianatra ny olona, fizarana ny avaratra dia azo araka ny filokana.
26:15 Marina tokoa, Obed-edoma sy ny zanany nahazo fa any atsimo, ao amin'ny faritry ny trano ny filan-kevitry ny anti-panahy no.
26:16 Sopima sy Hosa nahazo fa nanatrika ny andrefana, afa-tsy ny vavahady izay mitondra any amin'ny lalana mankany amin'ny fiakarana, lahatsoratra iray miatrika ny hafa.
26:17 Marina tokoa, nanatrika ny atsinanana dia nisy Levita enina, ary nanatrika ny avaratra nisy efatra isan'andro, ary avy eo dia toy izany koa manatrika ny atsimo nisy efatra isan'andro. Ary aiza ny filan-kevitra dia, nisy roa sy roa.
26:18 koa, ao amin'ny sela ny mpiandry varavarana nanatrika ny andrefana, nisy efatra teny an-dalana, ary roa tao sela rehetra.
26:19 Ireo no antokon'ny mpiandry varavarana tamin'ny taranak'i Kehata sy Merary.
26:20 Ary Ahia, no mpifehy ny rakitry ny tranon 'Andriamanitra, ary ny fanaka masina.
26:21 Ary ny zanakalahin'i Ladana, taranak'i Gersona: from Ladana, mpitarika ny fianakaviana Ladana sy Gersona: Jehielita.
26:22 Ny taranaky ny Jehielita: Zetama sy Joela; ny rahalahiny no tonian'ny rakitry ny tranon'i Jehovah,
26:23 tamin'ny Amramita, sy ny Jizarita, sy ny Hebronita, ary ny Ozielita.
26:24 Ankehitriny, Seboela, ny zanak'i Gersoma, ny zanak'i Mosesy, tao amin'ny toerana voalohany eo amin'ny trano firaketana,
26:25 miaraka amin'ny rahalahiny, Eliezer, sy ny Zanany Rehabia, sy ny Zanany Jesaia, sy ny Zanany Jorama, ary koa ny zanany lahy Zikry, sy ny Zanany Selomota.
26:26 Toy izany koa Selomota io sy ny rahalahiny no tonian'ny rakitry ny zava-masina, izay an'i Davida mpanjaka masina, ny mpitarika ny fianakaviana, ary ny tribunes, ary ny kapiteny, ary ny mpifehy ny miaramila.
26:27 Izany zavatra izany no avy ny ady, ary avy ny tsara indrindra babo ny ady, izay efa nohamasinina ho an'ny fanamboarana sy ny furnishing ny tempolin'ny Tompo.
26:28 Ary ireo zavatra rehetra ireo dia nanamasina ny Samuel, ny mpahita, ary Saoly, ny zanak'i Kisy, ary ny Abner, ny zanak'i Nera, ary Joaba, , zanak'i Zeroia,. Ireo izay rehetra efa nohamasinina ireo ny tanan 'i Selomota sy ny rahalahiny.
26:29 Na izany aza tena, Kenania sy ny zanany no tonian'ny ny Jizarita, fa ny asa ivelany ny amin'ny Isiraely, mba hampianatra sy hitsara azy ireo.
26:30 Ary hatramin'ny Hebronita, Hasabia sy ny rahalahiny, fiton-jato amby arivo ny lehilahy mahery dia mahery, no miandraikitra ny Isiraely manerana ny amoron'i Jordana eo andrefana, rehetra ny asan'ny Tompo, sy ny fanompoana ny mpanjaka.
26:31 Ary ny mpitarika ny Hebronita dia Jerijah, araka ny fianakaviany sy ny havany. Tamin'ny taona fahefa-polo nanjakan'i Davida, dia voalamina, ka nisy lehilahy mahery dia mahery hita tany Jazera Gileada.
26:32 Ary ny rahalahiny avy matotra roa arivo taona fiton-jato amby mpitarika ny fianakaviana. Ary Davida mpanjaka nametraka azy ireo niandraikitra ny Robenita, sy ny Gadita, ary ny antsasaky ny firenen'i Manase, rehetra ny asa fanompoana an'Andriamanitra sy ny mpanjaka.
27:1 Ary ny Zanak'Isiraely, araka ny isany avy, ny mpitarika ny fianakaviana, ny tribunes, ary ny kapiteny, ary ny lohan'ny, izay nanompo ny mpanjaka araka ny orinasa, miditra sy miainga amin'ny isam-bolana ny taona tahaka ny tamin'ny anjara-raharahany, efatra amby roa-arivo.
27:2 Jasobeama, ny zanak'i Zabdiela, no niandraikitra ny orinasa voalohany tamin'ny volana voalohany; sy eo ambaniny amby roa-efatra arivo.
27:3 Izy dia avy amin'ny taranak'i Fareza, ary izy no mpitarika ny hafa rehetra ny mpitarika tao amin'ny tafika, tamin'ny volana voalohany.
27:4 Ny fiangonana, dia ny volana faharoa dia nanana Dodo, Ahohita; Ary ny manarakaraka azy dia nisy, atao hoe Miklota, izay mpanapaka ny ampahany amin 'ny miaramilan' ny efatra arivo amby roa-.
27:5 koa, ny komandin'ny fahatelo orinasa, amin'ny volana fahatelo, dia Benaia, ny zanak'i Joiada mpisorona; ary ny antokony dia nisy efatra arivo amby roa-.
27:6 Toy izany koa ilay Benaia, izay mahery indrindra amin'ny ny telo-polo, ary teo ambonin'ny telo-polo. Fa ny zanany lahy, Ammizabad, no niandraikitra ny orinasa.
27:7 ny fahefatra, ho amin'ny volana fahefatra, i Asahela, , rahalahin'i Joaba,, ary Zebadia zanany no nanaraka azy; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:8 Ny fahadimy mpitarika, ho amin'ny volana fahadimy, i Shamhuth, Izrahite; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:9 fahenina, ho amin'ny volana fahenina, dia Ira, ny zanak'i Ikkesh, ny Tekoite; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:10 ny fahafito, ho amin'ny volana fahafito, , dia Heleza, ny Pelonita avy amin'ny taranak'i Efraima,; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:11 ny fahavalo, ho amin'ny volana fahavalo, , dia Sibekay, ny Hosatita avy amin'ny taranaky ny Zerita; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:12 ny fahasivy, ho amin'ny volana fahasivy, dia Abiezera, ny Anatotita avy tamin'ny taranak'i Benjamina; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:13 ny fahafolo, ho amin'ny volana fahafolo, , dia Maharay, ary izy dia Netofatita avy amin'ny taranaky ny Zerita; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:14 ny fahiraika ambin'ny folo, ho amin'ny volana fahiraika ambin'ny folo, dia Benaia, avy any Piratona avy amin'ny taranak'i Efraima,; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:15 ny faharoa ambin'ny folo, ho amin'ny volana faharoa ambin'ny folo, dia Helday, Netofatita avy amin'ny fototr'isiraely Otniela; ary ny orinasa nisy efatra arivo amby roa-.
27:16 Ary izay teo aloha noho ny firenen'Isiraely dia ireo: mpifehy ny Robenita, Eliezer, ny zanak'i Zikry, no mpanapaka; over tamin'ny Simeonita, Sefatia, zanak'i Maka, no mpanapaka;
27:17 mpifehy ny Levita, Hasabia, , zanakalahin'i Kemoela; over tamin'ny Aronita, Zadoka;
27:18 tamin'ny Joda, Elihu, ny rahalahin'i Davida; ny Isakara, Omry, ny zanak'i Michael;
27:19 over Zebolonita,, Ishmaah, ny zanakalahin'i Obadia; over ny Naphtalites, Jeremota, ny zanak'i Azriela;
27:20 ny taranak'i Efraima,, Hosea, , zanakalahin'i Azazia; noho ny antsasaky ny firenen'i Manase, Joel, , zanakalahin'i Pedaia;
27:21 ary ny tonian'ny iray antsasaky ny firenen'i Manase tao Gileada, izany, ny zanak'i Zakaria; avy eo ny Benjamina, Jasiela, , zanakalahin'i Abnera;
27:22 nefa tena, Azarel, ny zanak'i Jerohama, dia avy eo. Ireo no mpitarika ny Zanak'Isiraely.
27:23 Nefa Davida tsy vonona ny handamina azy hatramin'ny roa-polo taona no ho midina. Fa Jehovah efa nilaza fa hampitombo ny Isiraely ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra.
27:24 Joaba, , zanak'i Zeroia,, efa nanomboka isa, nefa tsy mahavita. Fa noho izany, fahatezerana efa nahazo Isiraely,. Ary noho izany ny isan 'ireo izay efa natao dia tsy misy ifandraisany amin'ny boky niresaka ny tantaran'ny Davida mpanjaka.
27:25 Ary noho ny storerooms 'ny mpanjaka dia Azmaveta, ny zanak'i Adiela. fa Jonatana, ny zanak'i Ozia, , no mpifehy storerooms ireo izay tany an-tanàn-dehibe, sy ny zana-bohiny, sy ny tilikambo.
27:26 Ary ny tonian'ny ny farmlands sy ny tantsaha, ireo izay niasa ny tany, i Ezri, ny zanak'i Keloba.
27:27 Ary ny tonian'ny tanim-boaloboka dia mpamboly ny Simey, ny Ramatita; Avy eo noho ny divay dia Zabdi LAKALY FITEHIRIZANA, ny Aphonite.
27:28 Ary noho ny sahan'oliva sy ny aviavy Aseraha, izay teo amin'ny tani-hay, dia Bala-hanana, ny Gaderita; ary ny tonian'ny diloilo dia Joasy LAKALY FITEHIRIZANA.
27:29 Ary ny tonian'ny omby tany niandry tao Sharon, Shitrai, ny Sharonite, tao amin'ny toerana voalohany; ary ny tonian'ny omby tany an-dohasaha, nisy Safata, ny zanak'i Adlay.
27:30 Marina tokoa, ny tonian'ny rameva dia Obil, ny Ismaelita; ary ny tonian'ny borikivavy dia Jedda, ny Meronotita.
27:31 Ary ny tonian'ny ondry aman'osy dia Jaziza, ny Hagarene. Ireo rehetra ireo no tonian'ny fananana mpitarika Davida mpanjaka.
27:32 Ary Jonatana, ny rahalahin-drain'i Davida, dia mpanolo-tsaina, Ny mahira-tsaina sy manam-pahaizana ny olona; izy sy Jehiela, ny zanak'i Hakmony, teo amin'ny zanaky ny mpanjaka.
27:33 Ary Ahitofela dia mpanolo-tsaina ny mpanjaka; ary Hosay, Arkita, no sakaizan'ny mpanjaka.
27:34 Rehefa Ahitofela dia Joiada, ny zanak'i Benaia, sy Abiatara. Fa ny mpitarika ny miaramilan'ny mpanjaka dia Joaba.
28:1 Ary toy izany koa i Davida novorina ny mpitarika ny Isiraely, ny mpanapaka ny foko, ary ireo izay mikarakara ireo ny orinasa, izay nanompo ny mpanjaka, ary koa ny tribunes sy kapiteny, ary ireo izay mikarakara ireo ny harena sy ny fananana ny mpanjaka, sy ny zanany, ny tandapa sy ny mahery sy ireo za-draharaha indrindra ao amin'ny tafika, tany Jerosalema.
28:2 Ary raha ny mpanjaka efa mitsangana ary nitsangana teo, hoy izy:: "Henoy aho, ry rahalahiko sy ry vahoakako. Nihevitra aho fa aho hanao trano, izay ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ny fitoeran-Andriamanitsika, mety sasatra. Ary noho izany dia nanomana ny zava-drehetra noho ny trano.
28:3 Nefa hoy Andriamanitra tamiko: 'Ary tsy mahazo manao trano ho an'ny anarako, satria lehilahy mpiady, sy mpandatsa-dra. '
28:4 Ary Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely efa nifidy ahy, avy tany manontolo ankohonan'ny raiko, mba tiako ho mpanjakan'ny Isiraely mandrakizay. Fa avy tamin'ny Joda no nofidiny mpitarika; dia avy ny taranak'i Joda dia nifidy an-tranon'ny raiko; sy ny ankohonan'ny raiko, dia sitraky ny fony hifidy ahy ho mpanjakan'ny Isiraely rehetra.
28:5 Ary koa, eo amin'ny lahy (fa Jehovah efa nanome ahy zanaka maro) dia nifidy Solomona zanako, ka dia izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana 'ny Tompo, amin'ny Isiraely.
28:6 Ary hoy izy tamiko: 'Solomona zanakao no hanao ny tranoko sy ny kianjako. Fa efa nifidy azy ho amiko toy ny zanaka, ary Izaho ho toy ny ray.
28:7 Ary hataoko mafy orina ny fanjakany, na dia hatrany amin mandrakizay, raha ta maharitra amin'ny manao ny didinao sy fitsipika, toy ny amin'izao andro izao. '
28:8 Koa ankehitriny, eo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra, teo anatrehan'ny Andriamanitsika, tandremo sy diniho ny didin 'ny Tompo Andriamanitsika, mba handova ny tany soa, ary mety bequeath izany ny taranakao anao, eny, mandrakizay.
28:9 Ary ny aminareo, Solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitry ny rainao, ka manompoa Azy amin'ny fo rehetra sy ny saina marisika. Fa Jehovah mpandinika ny fo rehetra, ka mahalala ny hevitry ny saina rehetra. Raha mitady Azy ianao, dia hahita azy. Fa raha mahafoy azy, dia horoahiko kely mandrakizay.
28:10 Koa ankehitriny, fa Jehovah efa nifidy anao, ka dia ianao no hanao ny trano ao amin'ny fitoerana masina, ho hery sy hanatanterahana izany. "
28:11 Ary Davida nanome an'i Solomona zanany ny famaritana ny lavarangana fidirana, ary ny tempoly, ary ny storerooms, sy ambony rihana, Ary ny efi-trano anatiny indrindra, sy ny trano ny fampihavanana,
28:12 ary koa ny rehetra tokoa ny fitsarana izay efa nomanina, ary ny efitra ivelany lafiny rehetra, ho an'ny rakitry ny tranon'i Jehovah, ary ny rakitry ny zava-masina,
28:13 sy ho an'ny antokon'ny mpisorona sy ny Levita: ny rehetra ny asan'ny ny tranon'i Jehovah sy ny zavatra rehetra teny amin'ny fanompoana ny tempolin'ny Tompo.
28:14 Nisy ny lanjan'ny volamena hanaovana ny fanaka rehetra amin'ny fanompoana, ary koa volafotsy araka ny lanjany ny fahasamihafana ny fanaka sy ny fitaovana.
28:15 Ary koa, dia nizara ho an'ny fitoeran-jiro volamena sy ny jirony, araka ny ohatry ny tsirairay fitoeran-jiro sy ny lela fanaovan-jirony. Toy izany koa, dia nizara volafotsy araka ny lanjany ny fanaovan-jiro volafotsy sy ny lela fanaovan-jirony, araka ny isan-karazany ny fepetra.
28:16 koa, dia nomeny volamena hanaovana ireo latabatra hametrahana ny fanatrehany, araka ny isan-karazany ny vato fisaka; toy izany koa, dia nomeny ho an'ny volafotsy ny latabatra volafotsy hafa.
28:17 koa, dia nizara avy ny tena volamena tsara ho an'ny kely farango sy ny vilia baolina sy ny sivana, ary koa noho ny liona kely volamena, araka ny marina ohatry ny lanjany, ny liona rehefa avy liona. Toy izany koa, fa ny liona volafotsy, dia nanokana ny lanjan'ny volafotsy hafa.
28:18 Avy eo, fa ny alitara izay efa may ny ditin-kazo manitra, dia nomeny ny tena volamena tsara. Ary hatramin'ny izany no nanaovany ny endriky ny kalesy, dia ny kerobima, miaraka amin'ny elatra maharitra, izay veiling ny fiaran'ny faneken'i Jehovah.
28:19 "Izany rehetra izany," hoy izy, "Ary tonga tamiko voasoratry ny tanan 'ny Tompo, mba tiako hahatakatra ny asan'ny atỳ amiko. "
28:20 Koa hoy Davida tamin'i Solomona zanany: "Manao Zavatra amim-boninahitra, ary hahazo hery amin ', ka ento hiala. Tsy tokony hatahotra, ary tsy tokony mivadi-po. Fa Jehovah Andriamanitro Homba anao, ka tsy handefa anao, na no handao anao, mandra-tanteraka ny asa iray manontolo amin'ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah.
28:21 Indro, ny antokon'ny mpisorona sy ny Levita, ho an'ny fanompoana rehetra ao an-tranon'i Jehovah, mijoro eo anatrehanao. Ary efa voaomana, koa araka izany ny mahalala, na ny mpanapaka ary ny vahoaka, ny fomba hanatanterahana ny didinao rehetra. "
29:1 Ary Davida mpanjaka niteny tamin'ny vahoaka manontolo: "Anaka Solomona, ilay Andriamanitra no nofidin'i, Mbola ny fitiavana zaza. Ary ny asa lehibe, ho fonenan'Andriamanitra dia efa voaomana, tsy ho an'olona, fa an'Andriamanitra.
29:2 Ary ny fahaizana rehetra, Izaho efa namboatra ny fandaniana ho an'ny tranon'Andriamanitro ianareo: volamena hanaovana zavatra volamena, ary ny volafotsy ho an 'ireo volafotsy, varahina ho an 'ireo varahina, vy ho an 'ireo vy, ary ny hazo ho an 'ireo hazo, beryla sy ny vato, ary ny vato toy ny vatosanga fasiana, ary ny vato samy hafa loko, ary isan-karazany ny vato soa, ary vato sanga avy Paros be dia be.
29:3 Ary ho fanampin 'izany zavatra izay efa nanatitra tao an-tranon'Andriamanitra Andriamanitro, manome aho, avy ny fananany, volamena sy volafotsy ho amin'ny tempolin'Andriamanitro, ankoatra ireo zavatra izay efa nomaniko ho an'ny toerana masina masina:
29:4 telo arivo talenta volamena, avy amin'ny volamena avy any Ofira, ary fito arivo talenta volafotsy voadio tena-, fa ny gilding ny rindrin'ny tempoly;
29:5 ary ny volamena na aiza na aiza misy mila volamena, ary ny volafotsy hanaovana na aiza na aiza misy mila volafotsy, fa ny asa tokony hatao 'ny tanan' ny mpanao asa tanana. Ary raha misy manolotra maimaim-poana, aoka izy hameno ny tànany androany, Ary aoka hanatitra izay rehetra maniry ho an'ny Tompo. "
29:6 Ary toy izany ny mpitarika ny fianakaviana, ary ny manan-kaja ny firenen'ny Israely, ary koa ny tribunes sy ny kapiteny sy ny mpiandraikitra ny mpanjaka harena, Nampanantena
29:7 ary nomeny, fa ny asa ao an-tranon'i Jehovah, talenta dimy arivo sy iray alina sekely volamena, iray alina talenta volafotsy, valo ambin'ny folo sy talenta varahina arivo, ary koa iray hetsy talenta vy.
29:8 Ary na iza na iza nahita vato soa eo amin'ny fananany nanome azy no amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah, ny hotehirizin'i Jehiela Gersonita.
29:9 Ary faly ny vahoaka, satria nampanantena izy ireo fanatitra an-tsitrapo ny voady. Fa izy ireo fanatitra ireo ho an'i Jehovah amin'ny fony manontolo. Ary Davida mpanjaka koa faly dia fifaliana.
29:10 Dia nitso-drano an'i Jehovah teo anatrehan'ny vahoaka manontolo, ka hoy Izy:: "Sambatra ianao, Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, ny Ray hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay.
29:11 anao, Tompo O, ny fahamboniany sy ny hery sy ny voninahitra, ary koa ny fandresena; ary ho aminareo ny fiderana. Noho ny zavatra rehetra izay any an-danitra sy eto an-tany dia anareo. Anao ny fanjakana, Tompo O, ary ianareo dia mihoatra noho izay rehetra mpitondra.
29:12 Anao ny harena, ary koa dia voninahitra. Anao hanapaka ny zavatra rehetra. An-tananao ny hatsaran-toetra sy ny hery. An-tananao no lehibe sy fahefana hamoaka ny zava-drehetra.
29:13 Koa ankehitriny, miaiky anao, Andriamanitsika, ary hidera ny anaranao malaza.
29:14 Iza aho, ary inona moa ny oloko, fa tokony ho afaka mampanantena izany rehetra izany ho anareo? Dia anareo rehetra. Ary toy izany koa ny zavatra izay tsy nandray ny tananao, no nanomezanay anao.
29:15 Fa izahay dia vahiny sy ny vao tonga eo anatrehanao, tahaka ny razanay rehetra. Ny androntsika eto an-tany dia tahaka ny aloka, ka tsy misy hataka andro.
29:16 Ry Tompo Andriamanitray, be izany rehetra izany, izay efa vonona mba trano mba haorina ny anaranao masina, dia avy amin'ny tananao, ary anareo ny zavatra rehetra.
29:17 fantatro, Andriamanitra ô, fa maka fanahy ny fo, ary mba hitiavanareo. Noho izany, amin'ny fahatsoran'ny foko, Izaho kosa efa nanatitra ireo zavatra rehetra ireo amim-pifaliana. Ary nahita aho, amin'ny fifaliana be, ny olonao, izay hita eto, manolotra ny fanomezana ho anao.
29:18 Tompo O, ny Andriamanitry ny razantsika Abrahama sy Isaka ary Isiraely, miaro amin 'ny mandrakizay izany faniriana ao am-pony, Ary aoka izany no tanjona hitoetra mandrakizay, ho an'ny fanompoam-pivavahana tamin'i anao.
29:19 koa, Omeko ny zanako fo marina Solomona, ka dia mba hitandrina ny didinao, ny fijoroana ho vavolombelona, ary ny lanonana, ary mba hahazoany manatontosa ny zavatra rehetra, ary mety hanao ny tempoly, izay izaho efa namboatra ny fandaniana. "
29:20 Ary Davida nandidy ny vahoaka manontolo: "Misaora an'i Jehovah Andriamanitray izahay." Ary nisaotra ny vahoaka manontolo ny Tompo, ny Andriamanitry ny razany. Ka niankohoka, dia niankohoka an'Andriamanitra, ary manaraka izy ireo ka hajaina ny mpanjaka.
29:21 Ary izy ireo niharam-boina sorona ho an'ny Tompo. Ary dia nanatitra sorona dorana amin'ny andro manaraka: dia vantotr'ombilahy arivo, ondrilahy arivo, zanak'ondry arivo, ny fanatitra aidina momba sy ny fombafomba rehetra, tena be dia be, ho an'ny rehetra, dia ny Isiraely.
29:22 Ka dia nihinana sy nisotro teo anatrehan'i Jehovah ny olona tamin'izany andro izany, tamin-kafaliana lehibe. Ary dia nanosotra an'i Solomona, ny zanak'i Davida, fanindroany. Ary dia nanosotra azy ho an'i Jehovah ho toy ny mpitondra, ary Zadoka tahaka ny mpisoronabe.
29:23 Ary Solomona dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Jehovah ho mpanjaka, handimby an'i Davida rainy, dia sitrak'i rehetra. Ary rehetra nanaiky azy ny Isiraely.
29:24 Koa, ny mpitarika, ary ny matanjaka, ary ny zanak'i Davida mpanjaka nampanantena ny tànany, ka tonga ambany Solomona mpanjaka.
29:25 Ary Jehovah nanandratra an'i Solomona ny Isiraely rehetra. Ary nomeny azy ny fanjakana be voninahitra, ny tsara fanahy toy ny tsy nisy olona nanana eo anatrehany, ho mpanjakan'ny Isiraely.
29:26 Ary Davida, ny zanak'i Jese, nanjaka tamin'ny Isiraely rehetra.
29:27 Ary ny andro nandritra izany no nanjakany tamin'ny Isiraely dia efa-polo taona. No nanjakany fito taona tao Hebrona, ary telo amby telopolo taona tao Jerosalema.
29:28 Ary maty izy rehefa tratrantitra tsara sady taona, voky andro sy harena ary voninahitra. Ary Solomona zanany no nanjaka nandimby azy.
29:29 Ary ny tantaran'i Davida mpanjaka, hatramin'ny voalohany ny farany, efa voasoratra ao amin'ny bokin'i Samoela mpahita, sy ao amin'ny bokin'i Natana mpaminany, ary ao amin'ny bokin'i Gada mpahita,
29:30 momba ny fanjakana sy ny hery rehetra, ary ny fotoana izay nandalo ambaniny, na ao amin'ny Isiraely sy ny fanjakana rehetra amin'ny tany.